ဗျာဒိတ်တော်သမိုင်းအချိန်ဇယား - ယေရှုခရစ်၏ဗျာဒိတ်တော်
သမ္မာကျမ်းစာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အချိန်မရှိပေ။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် အချိန်နှင့်နေရာတိုင်း၌ ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသော ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများသည် ခေတ်တိုင်းတွင် အချိန်တိုင်းတွင်ရှိခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ယေရှု၏ပထမဆုံးကြွရောက်လာခြင်း၊ သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတို့ကို အချိန်၏အဆုံးအထိ အကျုံးဝင်စေသည့် ဧဝံဂေလိနေ့၏ အချိန်ဇယားတစ်ခုလုံးကိုလည်း ဆက်စပ်ပေးပါသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းအပါအဝင်၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် လူသားထုတစ်ရပ်လုံးကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ရှိသည် သမ္မာကျမ်းစာကဲ့သို့ အခြားစာအုပ်မရှိပါ။ ဤနည်းဖြင့်
ကမ္ဘာဦးကျမ်းတွင်၊ သမ္မာကျမ်းစာသည် လူသားအပါအဝင် ဖန်ဆင်းခြင်းအစမှ စတင်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းအားဖြင့်၊ ဤအချိန်၏အစမှသည် ဘုရားသခင်၏လူမျိုးတော်မှတ်တမ်း၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိလူမျိုးနှင့် ဆက်ဆံရေး၊. ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင်၊ ထိုဆက်ဆံရေးကို သားတော်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။
ယခုဆိုလျှင် သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အခြားသော လူမျိုးများနှင့် ပတ်သက်သော အခြား မှတ်တမ်းများ အများအပြား ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာသည် “မိမိလူ” ဖြစ်သင့်သောသူများကိုသာ အလေးထားပါသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် မတူညီသောကြောင့် သတိပြုမိရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဗျာဒိတ်တော်သည် လူသားအားလုံး၏သမိုင်းနှင့် မပတ်သက်ပါ။ ၎င်းကို "လူသားအားလုံး၏သမိုင်း" အဖြစ် သင်ချဉ်းကပ်ပါက သင်၏နားလည်မှုကို ရှုပ်ထွေးစေမည်ဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် သူ၏လူစစ်များထံ လိပ်မူထားပြီး၊ သူ၏လူစစ်များထံ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အရာများအကြောင်းဖြစ်သည်- သမိုင်းတစ်လျှောက် ခရစ်ယာန်အတုများ၏ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကို ခံခဲ့ရသော်လည်း၊ ဗျာဒိတ်တော်ကို နားလည်ရန် ဤခြားနားချက်ကို နားလည်ရပါမည်။
ထို့ကြောင့်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် နောက်ဆုံးတရားစီရင်သည့်နေ့အထိ ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် ယေရှု၏ပထမဆုံးပေါ်ထွန်းချိန်ကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏နောက်ဆုံးအခန်းများတွင် ကျွန်ုပ်တို့သိသည်အတိုင်း ကမ္ဘာနှင့်လူသားတို့၏နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြခြင်းသာဖြစ်ပေသည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် အချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံး ဘုရားသခင့်လူမျိုး၏ ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ဇယားကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် ပြည့်စုံစေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခုလုံးသည် ယင်းကိုလုပ်ဆောင်သည့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် တစ်ခုတည်းသောစာအုပ်ဖြစ်သည်။ ရှေးခေတ် သို့မဟုတ် ခေတ်သစ်လူသားတို့ရေးသားသည့် အခြားကျမ်းစာ အပြည့်အစုံ စုစည်းမှု၏ အချိန်ဇယား၏ အချိန်ဇယားနှင့်ပင် အဝေးမှပင် မရောက်ပါ။
ထို့အပြင်၊ (ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံနေရသော) ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော အချိန်ကာလတစ်ခုရှိပါသည်။
“သတ္တမကောင်းကင်တမန်၏အသံကို ကြားသောကာလ၌၊ ဘုရားသခင်သည် မိမိကျွန်ပရောဖက်တို့အား မိန့်တော်မူသည်အတိုင်း၊ နက်နဲသောအရာသည် ပြီးလိမ့်မည်။” ~ ဗျာဒိတ် ၁၀:၇
ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုကာလတွင် နေထိုင်ပါသည်။ ဗျာဒိတ်သတင်းအပြည့်အစုံကို ဘုရားသခင်ကြေညာဖို့ အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကို အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်။ ၎င်းသည် “ဗျာဒိတ်သမိုင်းဆိုင်ရာ အချိန်ဇယား” တွင် ဤဆောင်းပါးကို ထုတ်ဝေရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ- ယေရှုခရစ်နှင့် ကိုယ်တော်၏စစ်မှန်သောနိုင်ငံတော်လူမျိုး၊ ခရစ်တော်၏ကိုယ်ပိုင်လူမျိုးကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာ ကျွန်ုပ်တို့သည် လှည့်စားခြင်းမှ အမှန်တရားကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာ ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေရန်နှင့် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောလူများကို ကြောင်သူတော်များထံမှ ခွဲခြားဖော်ပြနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ထိုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏အကြောင်းအရာကို ဦးစွာကြည့်ကြစို့။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်၊ ယေရှုခရစ်သည် သူ၏စစ်မှန်သောလူမျိုး၏စိတ်နှလုံးနှင့် သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဘုရင်များ၏ဘုရင်နှင့် သခင်တို့၏သခင်အဖြစ် ထင်ရှားသည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းရှိ အချိန်ဇယားသည် ယင်းကိုသာ ရောင်ပြန်ဟပ်ပြီး ဤအချိန်ဇယားတွင် အမှန်တရားနှင့် ဘုရား၏လူစစ်ကို ဆန့်ကျင်သည့် ခရစ်ယာန်အတုများ၏ အရေခြုံမှုကိုလည်း ဖော်ထုတ်ထားသည်။
ထို့ကြောင့် စာဖတ်သူနားလည်ရန် အရေးကြီးသည်- ခရစ်ယာန်အတုများကို ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲတွင် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်ဘာသာကို မခွဲခြားနိုင်သော အခြားသမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းများအားလုံး၊ ၎င်းတို့သည် ဤဗျာဒိတ်တော်အချိန်ဇယား၏ မပါဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့ကို “ထည့်သွင်း” ရန် မကြိုးစားပါနှင့်။ ၎င်းသည် သင့်အား စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများစွာ သက်သာစေမည်ဖြစ်သည်။
အလေးပေး၍ ထပ်လောင်းဆိုလိုသည်မှာ- ပျက်စီးနေသောအသင်းတော်များ၏ သမိုင်းများကို ထည့်သွင်းရန် မကြိုးစားပါနှင့်၊ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့သည် "အသင်းတော်" ကဲ့သို့ ယိုယွင်းနေသောအသင်းတော်များ၏ သမိုင်းများကို မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်။ အကယ်၍ အတိတ်က ပျက်စီးသွားသော ချာ့ခ်ျအချို့တွင် အဆိုပါ ပျက်စီးနေသော ချာ့ခ်ျကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် ကြိုးပမ်းနေသော စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်စစ်များ၏ သိသာထင်ရှားသော သမိုင်းဝင် မှတ်တမ်းမရှိပါက၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွင်းတွင် မည်သည့်ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲကိုမဆို ဘုရားသခင် ဖြေရှင်းပေးမည်ဟု မမျှော်လင့်ပါနှင့်။
ဤတွင်ထိုကဲ့သို့သော ပုံမှန် ခရစ်ယာန်ဘာသာ၏အချိန်ဇယား။ သို့သော် ဤပုံဆောင်သည့်အချိန်လိုင်းတွင် ဖော်ပြထားသော အချိန်ဇယားတိုင်းသည် မည်သည်ကို သတိပြုပါ။ မဟုတ်ဘူး ဗျာဒိတ်ကျမ်းသမိုင်းဆိုင်ရာ အချိန်ဇယားကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ ဆက်ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ ငါဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတာ မင်းနားလည်လာလိမ့်မယ်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါ နိယာမ ဗျာဒိတ်တော်များထဲမှ တစ်ခုသည် ခေတ်တိုင်းတွင် အောင်ပွဲခံသော အသင်းတော် (ဘုရားသခင့် သစ္စာရှိသူ အနည်းငယ်၊ သူ၏ အကြွင်းအကျန်) အကြောင်း ဖြစ်သည်။ အဲဒါ မင်းရှာချင်တဲ့ သမိုင်းဝင်မှတ်တမ်းပဲ။
ဒီလိုပြောနေပေမယ့် ဉာဏ်ကောင်းပြီး ဉာဏ်ကောင်းတဲ့သူတွေကတောင် ဒီအချိန်ဇယားကို ဖတ်ရှုနားလည်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ သမိုင်းတွေကို သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ကိုကိုယ်သိတဲ့စိတ်နဲ့ ရောထွေးနေမယ်ဆိုတာ ငါသိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က မင်းကို ကူညီမယ်လို့ ငါမျှော်လင့်ပြီး ဆုတောင်းနေရုံပဲ။
အထူးသဖြင့် ခရစ်ယာန်အယူအဆများနှင့် သမိုင်းအတုအယောင်များမှ လွတ်မြောက်စေရန် ကူညီပေးရန် သန့်ရှင်းသူများထံ ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ရေးသားထားသည်။ ခြားနားချက်ကို သိမြင်နိုင်သော တမန်တော်ယောဟန်ပင်လျှင် အကူအညီ လိုအပ်သည် (ဗျာဒိတ် ၁၇:၇ ကိုကြည့်ပါ)။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သောကြောင့်၊ ယင်းအချိန်အခါတွင် ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေများကိုဖော်ပြရန် သမိုင်း၏အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် ၎င်းသည် ခရစ်ဝင်ကျမ်းနေ့အတွင်း ဘုရားသခင်၏လူများ၏ နိယာမအာရုံစူးစိုက်မှုကို ထိခိုက်စေသည့် သီးခြားဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေများကို သတ်မှတ်ရန် ဘုရားသခင်က ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းကို နားလည်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ အပ်နှင်းထားသော သမိုင်းမှတ်တမ်းတစ်လျှောက်တွင် ဘုရားသခင် အမှန်တကယ် ကယ်တင်ခံရသော လူများ၏ ပထဝီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ နိယာမကိုလည်း လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။
ယခု ခရစ်ဝင်ကျမ်းနေ့၏ သမိုင်းတစ်လျှောက် သမိုင်းဝင်အချိန် သတ်မှတ်ချက်များအကြောင်း ပြောကြပါစို့။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာတွင် အချိန်သတ်မှတ်ချက်များစွာရှိပြီး၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာတွင် ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤအချိန်ကာလများကို နားလည်စေလိုသည်ဟု အတိအကျဖော်ပြထားသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်၊ သမိုင်းတွင် အရှင်းဆုံးသတ်မှတ်ထားသော “အချိန်ကာလ” သည် အနှစ် 1,260 ကာလသည် မည်သည့်အချိန်နှင့် ပြီးဆုံးသွားသနည်း။ (မှတ်ချက်- ဤနှစ်များကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းနှင့် ဒံယေလတွင် “နေ့ရက်များ” အဖြစ် ပရောဖက်ပြုဖော်ပြပါသည်။)
ဤနှစ် 1,260 ကာလကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ငါးကြိမ်နှင့် ဒံယေလကျမ်း (အခန်း 7) တွင် တစ်ကြိမ်၊ စုစုပေါင်း ခြောက်ကြိမ်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့ကို အထူးအာရုံစိုက်စေလိုသည့် “သမိုင်းဝင်အချိန်” အချက်ကို ပြုလုပ်နေသည်မှာ ထင်ရှားသည်။
ထို့အပြင် ရက်ပေါင်း 1,260 ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဓမ္မဟောင်းကျမ်းပါ ဖြစ်ရပ်နှစ်ခုက ဤရက်/နှစ် 1,260 ကာလကို ထပ်လောင်းနားလည်ပါသည်။
ပရောဖက်ဧလိယလက်ထက်တွင် သုံးနှစ်ခွဲ သို့မဟုတ် ရက်ပေါင်း 1,260 အစာခေါင်းပါးသည်။ (ယာကုပ် ၅:၁၇)၊
နေဗုခဒ်နေဇာမင်းကြီးသည် သားရဲကဲ့သို့နေထိုင်ခဲ့သော သုံးနှစ်ခွဲ (ရက်ပေါင်း 1,260) ရာသီပြောင်းခြင်း ခုနစ်ရာသီဖြစ်သည်။ (ဒံယေလ အခန်းကြီး ၄)
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဤဝိညာဉ်ရေးရက်/နှစ် 1,260 အချိန်ကာလ၏ ဖော်ပြချက်များစွာရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤအချိန်ကာလ 1,260 ၏ ချက်ခြင်းနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သော ဖော်ပြချက်စာသားများစွာလည်း ရှိပါသည်။ သင်သည် ဤအကူးအပြောင်းအမှတ်ကို ရက်ပေါင်း 1,260 မှ နောက်အချိန်ကာလသို့ သုံးသပ်သောအခါ၊ ဤအရာ၏အစကို သင်သဘောပေါက်ပါသည်။ နောက်တစ်ခု အချိန်ကာလသည် ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ချ်၏ အမှောင်အလယ်ခေတ်ပြီးနောက် 1500 ခုနှစ်များတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော “ပရိုတက်စတင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး” ဟုခေါ်သည့် လူသိများသည့်အရာ၏ အစဖြစ်နိုင်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်၊ ရက်ပေါင်း 1,260 သည် Papacy နှင့် Catholic Church ၏ ပါပစီနှင့် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ အာဏာရလာခြင်းနှင့် လှည့်စားသော အုပ်ချုပ်မှုကို ဖော်ပြသည်။ ၎င်းနောက်ဆက်တွဲအချိန်ကာလသည် ဝိညာဉ်ရေးအရ ပြိုလဲနေသော ပရိုတက်စတင့်အဖွဲ့အစည်းများ၏ အာဏာရလာမှုနှင့် လှည့်ဖြားသောအုပ်စိုးမှုဖြစ်သည်။ ဤပရိုတက်စတင့်ခေတ်သည် သမိုင်းတွင်တရားဝင်နည်းလမ်းဖြင့် စတင်ခဲ့သော “အချိန်နှင့်ဆိုင်သောအချက်” ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ထုတ်ထားပြီး သမိုင်းကြောင်းအရ နည်းလမ်းများစွာနှင့် အရင်းအမြစ်များစွာမှ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤသမိုင်းတွင် ထင်ရှားစွာသတ်မှတ်နိုင်သော ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အသွင်ကူးပြောင်းမှုအမှတ်သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ကျန်အချိန်ဇယားကို စတင်ဖော်ပြရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ရှင်းလင်းပြတ်သားသော “အစမှတ်” ကို ပေးသည်။
ဤရက်စွဲ၏ အကောင်းဆုံး ခန့်မှန်းခြေမှာ 1530 ဖြစ်ပြီး၊ ပထမဆုံး တရားဝင် ပရိုတက်စတင့် အယူဝါဒဆိုင်ရာ ယုံကြည်ချက်များကို ထုတ်ဝေပြီး စာရင်းသွင်းသည့် နေ့စွဲဖြစ်သည်။ (အခြားအပြိုင်အဆိုင်အယူဝါဒများစွာသည် ခရစ်ယာန်သမိုင်းတွင် အဆင့်သစ်တစ်ခုကို သက်သေပြပြီးနောက်တွင် လူတို့သည် အယူဝါဒအသစ်များနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အထောက်အထားအသစ်များစွာကို ဖန်တီးကြပြီး အယူမှားသူများသည် ၎င်းတို့၏ဘုရားနှင့်ဘာသာတရားအသစ်များကို တိုးပွားများပြားစေသည့်ပုံစံနှင့် ဆင်တူသောလူများကို ရှုတ်ချကြသည်။)
တစ်ဖန်၊ သမိုင်း၏ဤအထူးအချိန်ကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းပါဖော်ပြချက်များမှတစ်ဆင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ခွဲခြားသိမြင်နိုင်ကာ သမိုင်းတွင် ငြင်းမရနိုင်လောက်အောင် ထင်ရှားပါသည်။
ဤအထူးရက်စွဲမှစတင်၍ ဗျာဒိတ်ကျမ်းရှိ ကျန်အချိန်ကာလများကို ချိန်ညှိရာတွင် အပြစ်မရှာပါနှင့်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် AD 1530 ဤရက်စွဲ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင် ဤထူးခြားသောအချိန်ကာလနှစ်ခုကို သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဖော်ပြချက်ဖြင့် အချိန်ပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှုကို ဖော်ထုတ်ပေးသော ဘုရားသခင်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အခုကျတော့ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျကနေ ပရိုတက်စတင့်ခေတ်အထိ အဓိကအားဖြင့် လိုက်နေတဲ့ သမိုင်းဝင်လမ်းကို ဘာကြောင့် လျှောက်ရမှာလဲလို့ တချို့က မေးခွန်းထုတ်ကြလိမ့်မယ်။ ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းသည် ပရိုတက်စတင့်မတိုင်မီက တစ်ခုတည်းသောဘုရားကျောင်းမဟုတ်ပေ။ အာမေးနီးယန်းဘုရားကျောင်း၊ Syriac ဘုရားကျောင်း၊ Coptic ဘုရားကျောင်း၊ Eastern Orthodox ဘုရားကျောင်း၊ စသည်တို့လည်းရှိခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှုက ဘယ်က ထွက်လာတာလဲ။
1500 ခုနှစ်များ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှုမတိုင်မီ ချာ့ခ်ျ၏ အခြားသော ကွဲလွဲမှုများမှ ထွက်ပေါ်လာသော အရေးပါသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုအတွက် ကျမ်းစာယုံကြည်ချက်ကြောင့် အသေခံကြသူများ၏ မှတ်တမ်းမရှိပါ။ ဤအစောပိုင်း ကွဲလွဲမှုများ (အာမေးနီးယန်းဘုရားကျောင်း၊ Syriac ဘုရားကျောင်း၊ Coptic ဘုရားကျောင်း၊ Eastern Orthodox ဘုရားကျောင်း စသည်ဖြင့်) သည် အဓိကအားဖြင့် အာဏာနှင့် သြဇာအာဏာကို လိုလားသော အမျိုးသားများကြောင့် ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအလွန်ရှေးကျသော အယူအဆများကို ထိခိုက်စေသည့် တစ်ခုတည်းသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အားထုတ်မှုများသည် 1500 ခုနှစ်များအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားမှု စတင်နေပြီဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ချ်မှ ထွက်ခွာသွားသော လူမျိုးနွယ်တစ်ခုမှ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ အာမေးနီးယန်းဘုရားကျောင်း၊ Syriac ဘုရားကျောင်း၊ Coptic ဘုရားကျောင်း၊ Eastern Orthodox ဘုရားကျောင်းစသည်ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော မည်သည့် ထင်ရှားသောအရွယ်အစားရှိသော ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားမှု မရှိပါ။
တကယ်တော့၊ 1500 ခုနှစ်များရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှု မတိုင်ခင်မှာ ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ချ်အတွင်း လူတစ်ဦးချင်းစီက သူမကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေ အများကြီး မှတ်တမ်းရှိပါတယ်။ Waldenesians၊ Jan Huss၊ John Wycliffe စသည်တို့ရှိခဲ့သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့၏စိတ်ဝိညာဉ်များကိုဖော်ပြသောအမှန်တရားအတွက် သေခြင်းတရားကိုစွန့်စားလိုသောဆန္ဒဖြင့် နှလုံးသားများစွာအတွင်း၌ထိုကဲ့သို့သောအလုပ်ကိုလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နှိုးဆော်မှု၏သမိုင်းဝင်မျိုးရိုးကို သတိရပါ၊ လူများ၏စိတ်နှလုံးအတွင်းတွင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းနှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုနားလည်ရန် သမိုင်းဆိုင်ရာအချိန်ဇယားကို လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းခြားသိမြင်မှုအနည်းငယ်ဖြင့် သမိုင်းပညာရှင်များမှတ်တမ်းတင်ထားသော ချာ့ခ်ျအဖွဲ့အစည်းသမိုင်းများကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာရုံမျှဖြင့် ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် မယုံကြည်မှုများကိုသာ ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဗျာဒိတ်သတင်းစကားသည် ခရစ်တော်၏ကျေးကျွန်အစစ်များထံသို့သာ လိပ်မူခဲ့သည် (ဗျာဒိတ် ၁း၁-၄ ကိုကြည့်ပါ)၊ အမှန်နှင့်အမှားကို ပိုင်းခြားသိမြင်နိုင်စေကြောင်းကိုလည်း သတိရပါ။ ထိုခြားနားချက်ကို ထင်ရှားအောင်ပြုလုပ်ရန် တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာ သမိုင်းစဉ်အတွင်း ဘုရားသခင်၏လူအစစ်များ တည်ရှိရာနေရာကို နောက်လိုက်သော သမိုင်းဝင်အချိန်ဇယားတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ရဲ့လူစစ်တွေ ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာ သင်တကယ်သိချင်ပါသလား။ သို့ဆိုလျှင်၊ သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး ခရစ်တော်နောက်သို့ နှိမ့်ချစွာ လိုက်ပါခဲ့ကြသည့် ဝိညာဉ်သိုးဝိညာဉ်အားဖြင့် ဘုရားသခင်သည် ၎င်းကို သင့်အား ထုတ်ဖော်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
မိန်းမတို့တွင် အဆင်းလှသော၊ သင်သည် မသိလျှင် သိုးခြေရာကို လိုက်၍ သိုးထိန်းတဲနားမှာ သင်၏သားတို့ကို ကျွေးမွေးလော့။ ~ ရှောလမုန်သီချင်း ၁:၇-၈
ဘုရားသခင်သည် မိမိလူမျိုးအတွက် ပေးဆောင်ထားသည့် ဝိညာဉ်ရေး “သိုးထိန်းတဲများ” ကို သင့်အား ခွဲခြားသိမြင်ပါစေ။
ဒါကြောင့် အခု ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာ နှစ်ပေါင်း ၁၂၆၀ ကို ဘုရားသခင် ဖော်ထုတ်ကြပါစို့။ ရှေးဦးစွာ တစ်နှစ်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် တစ်ရက်ကို ပရောဖက်ပြုချက်ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ကြောင်း အတိအကျဖော်ပြသည့် ကျမ်းချက်အားဖြင့်၊
သင်ပိုမိုလွယ်ကူစွာဖတ်ရှုနိုင်စေရန်အတွက် ဤနေရာတွင် နောက်ဆုံးတစ်ခုကို ကိုးကားဖော်ပြပါသည်။
“သင်​တို့​ပြည်​ကို​ရှာ​ဖွေ​သော​ရက်​များ​သည်​တစ်​နှစ်​ပတ်​သက်​၍​ရက်​လေး​ဆယ်​တိုင်​အောင်၊ အ​နှစ်​လေး​ဆယ်​တိုင်​အောင် မင်း​၏​ဒု​စ​ရိုက်​ကို​ခံ​ရ​မည်​ဖြစ်​၍ ငါ​၏​က​တိ​ကို​ဖျက်​ဆီး​သည်​ကို​သိ​ရ​လိမ့်​မည်။” ~ တောလည်ရာ ၁၄:၃၄
ဒါကြောင့် ရက်ပေါင်း 1,260 ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်တဲ့ ကျမ်းချက်တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ဗျာဒိတ် 11 အခန်းကြီးတွင် ပထမဦးစွာ ဤနေ့ရက်များကို ဝိညာဉ်ရေးယေရုရှလင်အသစ်အဖြစ် အသင်းတော်သည် ရက်ပေါင်း 1,260 နှင့် ညီမျှသော 42 လကြာ အရိုအသေခံရမည့်အချိန်အဖြစ် သတ်မှတ်ဖော်ပြသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းရေးသားချိန်၌ ယေရုရှလင်မြို့သည် ရောမတို့၏ လုံးလုံးလျားလျား ပျက်စီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း သတိရပါ။ ထို့ကြောင့် ဗိမာန်တော်သည် လုံးလုံးပျက်စီးသွားပြီးကတည်းက ပြန်လည်မတည်ဆောက်ရသေးသောကြောင့် ဤကျမ်းချက်သည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာယေရုရှလင်အကြောင်း ပြော၍မရပေ။ ဤသည်မှာ ချာ့ခ်ျကိုကိုယ်စားပြုသော ဝိညာဉ်ရေးယေရုရှလင်အကြောင်းသာ ပြောနိုင်သည်။ (ယေရုရှလင်မြို့ရှိ ဝတ်ပြုရာအိမ်တော် ပြန်လည်တည်ထောင်ခြင်း အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှုတွင် သင် အလေးအနက် ဆိုင်းငံ့ထားမည်ဆိုပါက၊ သင်သည် “ဖတ်နိုင်သည်။ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်း 20 ရှိ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုးမှု” ဤအချက်အပေါ် အခြေခံ၍ ကျမ်းချက်ရှင်းလင်းချက်အတွက်။)
ဒါကြောင့် ဝိညာဏဗိမာန်တော်နဲ့ ဝိညာဏယေရုရှလင်အကြောင်း ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
“ထိုအခါ ကြိမ်လုံးနှင့်တူသော ကျူတလုံးကို ငါ့အား ပေး၍ ကောင်းကင်တမန်က၊ ထ၍ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်နှင့် ယဇ်ပလ္လင်တို့ကို တိုင်းထွာ၍ ကိုးကွယ်သောသူတို့ကို တိုင်းထွာလျက်၊ ဗိမာန်တော်နှင့်မဆိုင်သော တန်တိုင်းမူကား၊ အကြောင်းမူကား၊ ထိုမြို့ကို တပါးအမျိုးသားတို့အား ပေး၍ သန့်ရှင်းသောမြို့ကို လေးဆယ်နှစ်လပတ်လုံး ခြေဖြင့်နင်းကြလိမ့်မည်။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၁:၁-၂
ဤအရာက ဝိညာဏဗိမာန်တော်ဖြစ်သည်။ (သခင်ယေရှုအသက်ရှင်သောစိတ်နှလုံးရှိသူများသည် “သင်တို့သည် ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကို မသိကြ။” ~ ၁ကော ၃:၁၆။ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် ကို ကိုယ်စားပြုသော လှံတံဖြင့် တိုင်းတာနိုင်သည်။
သို့သော် ယေရုရှလင်မြို့သစ်၊ မြင်နိုင်သော ခရစ်တော်၏ စုပေါင်းကိုယ်ခန္ဓာကို ကိုယ်စားပြုသော ယေရုရှလင်မြို့သစ်သည် ဝိညာဉ်ရေးဂျူးမဟုတ်သူများ (ဝိညာဉ်ရေးအရ လူမျိုးခြားများ) ကို မလေးစားရာရောက်ပါသည်။ သူသည် ထိုအချိန်က ချာ့ခ်ျ၏ခေါင်းဆောင်မှုတွင် ကြောင်သူတော်များအကြောင်း ပြောဆိုနေပြီး၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို အခွင့်ကောင်းအတွက် အလေးအမြတ်ပြုကာ အလွဲသုံးစားလုပ်သူဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သော ဓမ္မဆရာများနှင့် ဘုရားသခင်၏သားစစ်များကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းအတွက် သူတို့၏အခွင့်အာဏာကို အလွန်အမင်း အသုံးချခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၁ တွင် ထပ်ဆင့်ဖော်ပြထားသည်–
“ထို့ပြင် ငါ့သက်သေနှစ်ယောက်အား ငါအာဏာပေး၍ လျှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်လျက် ရက်ပေါင်းတစ်ထောင်နှစ်ရာ့ခြောက်ဆယ် ပရောဖက်ပြုရကြမည်။ ဤရွေ့ကား သံလွင်ပင်နှစ်ပင်၊ မြေကြီး၏ဘုရားသခင် ရှေ့တော်၌ ရပ်နေသော မီးခုံနှစ်ချောင်း၊ အကြင်သူသည် သူတို့ကို ညှဉ်းဆဲလျှင် ခံတွင်းထဲက မီးထွက်၍ ရန်သူတို့ကို မျိုတတ်၏။ အကြင်သူသည် သူတို့ကို ညှဉ်းဆဲလျှင် ဤနည်းဖြင့် သတ်ရမည်။ သူတို့သည် ပရောဖက်ပြုသောကာလ၌ မိုဃ်းမရွာစေခြင်းငှာ ကောင်းကင်ကို ပိတ်ထားနိုင်သော အစွမ်းသတ္တိရှိ၍၊ ရေကို သွေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲစေခြင်းငှာ၊ အလိုတော်ရှိသမျှ ကာလပတ်လုံး ဘေးဥပဒ်နှင့် မြေကြီးကို ဒဏ်ခတ်နိုင်သော တန်ခိုးရှိတော်မူ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၁:၃-၆
ဧဝံဂေလိတရားနေ့အတွင်း သစ္စာရှိသက်သေနှစ်ဦး (သခင်ယေရှုပထမအကြိမ်ကြွလာချိန်မှ ကမ္ဘာအဆုံးတိုင်အောင်) သည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။ (ဇာခရိ ၄:၁၄ & ၁ ယောဟန် ၅:၈) ထို့ကြောင့် အထက် ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး ၁၁ ပါ ကျမ်းချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရသော စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုတစ်ခုရှိသော်လည်း (“လျှော်တေအဝတ်ကိုဝတ်” ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်– ဤဓမ္မအမှု၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်သူ၏သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်သူတို့၌, ကက်သလစ်ချာ့ချ်၏အကျင့်ပျက်ခေါင်းဆောင်မှုဆန့်ကျင်ပရောဖက်ပြုခဲ့သည်။ သူတို့ပြောသောအမှန်တရားသည် အရေခြုံခေါင်းဆောင်မှုအပေါ် ဝိညာဉ်ရေးဘေးဆိုးတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်သည်။
ဤညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုအချိန်ကို ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၂ တွင် နောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်ရှင်းပြထားပြီး၊ စစ်မှန်သောအသင်းတော်သည် ကယ်တင်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ဝိညာဉ်ကလေးများကို ဖွားမြင်သော ခရစ်တော်၏သတို့သမီးအဖြစ် ခရစ်တော်၏သတို့သမီးအဖြစ် ပြသထားသည်။
“လူအမျိုးမျိုးတို့ကို သံလှံတံနှင့်အုပ်စိုးရသော သားယောက်ျားကို ဘွားမြင်သဖြင့်၊ သူ၏သားသည် ဘုရားသခင်ထံတော်သို့၎င်း၊ ရာဇပလ္လင်တော်သို့ချီဆောင်ခြင်းခံရ၏။ ထိုမိန်းမသည် ရက်ပေါင်းတထောင်နှစ်ရာ့ခြောက်ဆယ်ကို ကျွေးမွေးခြင်းငှါ ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တော်မူသော တော၌ပြေးလေ၏။
…ထို့ပြင် နဂါးသည် မြေကြီးပေါ်သို့ ပစ်ချခံရသည်ကို မြင်သောအခါ၊ ယောက်ျားကလေးကို မွေးဖွားသော မိန်းမကို ညှဉ်းဆဲလေ၏။ ထိုမိန်းမအား မြွေ၏မျက်နှာမှ တစ်ကြိမ်၊ အကြိမ်၊ တစ်ကြိမ် ကျွေးမွေးရာ တော၌ ပျံနိုင်စေခြင်းငှာ လင်းယုန်ကြီး၏ အတောင်နှစ်ချောင်းကို ပေးတော်မူ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၁၂:၅-၆ နှင့် ၁၃-၁၄
"အကြိမ်၊ အချိန်နှင့် အချိန်တစ်ဝက်" သည် သုံးနှစ်ခွဲ သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ရက်ပေါင်း 1,260 ဖြစ်သည်။ ပရောဖက်ပြုချက်နှစ်သည် တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် ၃၆၀ ရက်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ တောထဲ၌ အမျိုးသမီး/ဘုရားကျောင်း ပျံသန်းမှုကို ဖော်ပြသည့် ဤအခန်းသည် တူညီသောကြောင့် တူညီသော အချိန်ကာလကို ဖော်ပြရန် ရက်ပေါင်း 1260 နှင့် "အချိန်၊ အကြိမ်နှင့် တစ်ဝက်" ကို အသုံးပြုသည်- ၎င်းသည် "အချိန်" ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အတိအကျ အတည်ပြုပေးပါသည်။ .
ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ဘေးဒဏ်များကြောင့် ကက်သလစ်အသင်းတော်၏ လျှို့ဝှက်မှုအပေါ် ဝိညာဉ်ရေးတောကန္တာရနေရာဖြစ်ကြောင်း သတိပြုပါ။ (ဗျာဒိတ် ၁၁:၆ တွင် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြင့် ဘိသိက်ခံသော စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ “ဤသူတို့သည် ပရောဖက်ပြုသောကာလ၌ မိုဃ်းမရွာစေခြင်းငှာ ကောင်းကင်ကိုပိတ်နိုင်သော တန်ခိုးရှိ၏” ဟုဖော်ပြထားသည်ကို သတိရပါ။ သူတို့ပြောသော မိုးသည် ဘုရားသခင်ထံမှလာသော ဝိညာဉ်ရေးကောင်းချီးများဖြစ်သည်။) သို့သော် တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောလူများဖြစ်သော စစ်မှန်သောအသင်းတော်မှ "သူမသည် ရက်ပေါင်းတစ်ထောင်နှစ်ရာ့ခြောက်ဆယ်ကို ထိုအရပ်၌ ကျွေးမွေးပြုစုခြင်းငှာ ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ထားသော နေရာတစ်ခုရှိသည်" ဟုလည်း သတိပြုပါ။ သူ့ကိုတိုက်ရိုက်ကျွေးမွေးသောသူများသည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခံရခြင်းကြောင့် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် “လျှော်တေအဝတ်ကို ၀တ်” ကြသည်လည်းရှိသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းက ဘယ်သူ့အကြောင်းပြောနေတယ်ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရသေးပါဘူး- 13th အခန်းကြီးမှာ တစ်ဖန် ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသည် ပုဂံဘာသာတရားထံမှ ၎င်း၏အခွင့်အာဏာကို လက်ခံရရှိကြောင်း ပြသထားသည်။ ဤအခွင့်အာဏာဖြင့် သူတို့သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များကို လှည့်ဖြားကာ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံနိုင်ကြသည်။ Paganism ကို နဂါးအဖြစ် သင်္ကေတပြုပြီး ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းကို သားရဲအဖြစ် သင်္ကေတပြုသည်။ တစ်ဖန်၊ ဤသားရဲသည် ဤအဆုံးစွန်သော အခွင့်အာဏာဖြင့် 42 လ သို့မဟုတ် 1,260 ရက်/နှစ်အထိ ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။
“သားရဲအား တန်ခိုးပေးသော နဂါးကို ကိုးကွယ်၍ သားရဲနှင့်တူသော အဘယ်သူနည်းဟု ဆိုလျက် သားရဲကို ကိုးကွယ်ကြ၏။ အဘယ်သူသည် စစ်တိုက်နိုင်သနည်း။ ကြီးစွာသောစကား၊ ကဲ့ရဲ့စရာစကားကို ပြောသော နှုတ်ကို ခံရ၏။ လလေးဆယ်နှစ်ပတ်လုံး ဆက်၍နေရန် တန်ခိုးကို ပေးတော်မူ၏။ နာမတော်ကို၎င်း၊ တဲတော်နှင့် ကောင်းကင်ဘုံ၌နေသောသူတို့ကို၎င်း ကဲ့ရဲ့ခြင်းငှါ၎င်း နှုတ်ကိုဖွင့်လေ၏။ သန့်ရှင်းသူတို့နှင့် စစ်တိုက်၍ အောင်နိုင်စေခြင်းငှာ၊ အမျိုးအနွယ်၊ ဘာသာစကား၊ လူမျိုးအပေါင်းကို အုပ်စိုးသော အခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၃:၄-၇
ဒံယေလသည် ဘုရားသခင်ကို စော်ကားပြီး ဘုရားသခင့်လူမျိုးကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မည့် ဘာသာရေးအာဏာတစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာမည့် ရက်/နှစ် 1,260 ကာလကိုလည်း ဟောပြောခဲ့သည်။ ဤဘာသာရေးစွမ်းအားသည် အခန်းကြီး7တွင်ဒံယေလ၏စတုတ္ထသားရဲနိုင်ငံ (ရောမ) မှထွက်လာမည့် "ဦးချိုငယ်" ကဲ့သို့သေးငယ်သောဘာသာရေးတန်ခိုးစတင်သည်။ (မှတ်ချက်- ဒံယေလ၏စတုတ္ထနိုင်ငံတော်သုံးခုမှာ ဗာဗုလုန်၊ မီဒို-ပါးရှားနှင့် ဂရိရှားဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ဂရိပြီးနောက် စတုတ္ထ-ရောမမြို့ဖြစ်လာသည်။)
“စတုတ္ထသားရဲသည် မြေကြီးပေါ်၌ စတုတ္ထနိုင်ငံဖြစ်လတံ့၊ တိုင်းနိုင်ငံတို့မှ အမျိုးမျိုးကွဲပြား၍ မြေတပြင်လုံးကို ကိုက်စား၍ နင်းချေ၍ အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ကြလိမ့်မည်။ ဤနိုင်ငံတော်မှ ချိုဆယ်ချောင်းတို့သည် ပေါ်ထွန်းလတံ့သော ရှင်ဘုရင်ဆယ်ပါး ဖြစ်၍၊ နောက်တကောင်သည် ပေါ်ထွန်းလိမ့်မည်။ သူသည် ပထမမင်းနှင့် ကွဲပြား၍ ဘုရင်သုံးပါးကို အုပ်စိုးလိမ့်မည်။ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရားကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ ကြီးစွာသော စကားကို ပြောဆို၍၊ အမြင့်ဆုံးသော ဘုရား၏ သန့်ရှင်းသူတို့ကို သုတ်သင်ပယ်ရှင်း၍၊ ခေတ်ကာလနှင့် ပညတ်တို့ကို ပြုပြင်ခြင်းငှါ အကြံရှိသဖြင့်၊ ကာလအချိန်အခါနှင့် အချိန်ကို ပိုင်းခြား၍ လက်သို့ အပ်တော်မူလိမ့်မည်။ တရားစီရင်ခြင်းခံရ၍ သူ၏အာဏာကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ အဆုံးတိုင်အောင် ဖျက်ဆီးကြလိမ့်မည်။” ~ ဒံယေလ ၇:၂၃-၂၆
ထို့အပြင် လာမည့်အချိန်ကာလအကြောင်းကို ဒံယေလအား ထပ်မံမေးမြန်းသောအခါ အလားတူအချိန်ကာလကို ဒံယေလအား ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဒါက သူရရှိခဲ့တဲ့ တုံ့ပြန်မှုပါ။
“မြစ်ရေပေါ်မှာရှိသော ပိတ်ချောကို ၀တ်သောသူသည် လက်ျာလက်နှင့် လက်ဝဲလက်ကို ကောင်းကင်သို့ ချီမြှောက်၍၊ ကာလအစဉ်အမြဲ အသက်ရှင်သော သူအား အချိန်အခါဖြစ်မည်ဟု ကျိန်ဆိုသည်ကို ငါကြား၏။ , တစ်ဝက်; သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၏တန်ခိုးကို ဖြန့်ကြဲခြင်းငှာ ပြီးမြောက်သောအခါ၊ ဤအရာအလုံးစုံတို့သည် ပြီးလိမ့်မည်။ ~ ဒံယေလ ၁၂:၇
တဖန် “အချိန်နှင့်အချိန်နှင့် အချိန်ခွဲဝေခြင်း” သည် သုံးနှစ်ခွဲ သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ရက်ပေါင်း 1,260 ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဒံယေလ ၇:၂၆ တွင် ကျွန်ုပ်တို့အား ဤသို့ဖော်ပြသည်– “တရားစီရင်ခြင်းသည် ထိုင်၍ သူ၏အာဏာကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ အဆုံးတိုင်အောင် သုတ်သင်ပယ်ရှင်းကြလိမ့်မည်။” ဤရိုမန်ကက်သလစ်သားရဲသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် တရားစီရင်ခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းသည် 1500 ခုနှစ်များအတွင်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကြောင့် စတင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒံယေလ ၁၂:၇ ပါဒုတိယကျမ်းချက်က “အချိန်၊ အချိန်၊ သန့်ရှင်းသောလူမျိုး၏တန်ခိုးကို ဖြန့်ကြဲခြင်းငှာ ပြီးမြောက်သောအခါ၊ ဤအရာအလုံးစုံတို့သည် ပြီးလိမ့်မည်။ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ အမှောင်ခေတ်များ အုပ်စိုးပြီးနောက်၊ ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းများသည် “သန့်ရှင်းသူများ၏တန်ခိုးကို ဖြန့်ကျက်” ကြလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ရက်ပေါင်း 1260 တွင်သာမက ထိုအချိန်ကာလ၏ နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပျက်မှုများကိုပါ ပိုမိုထိုးထွင်းသိမြင်စေသည်။
ထို့ကြောင့်၊ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျက ခံစားခွင့်ရသော အဆုံးစွန်သောအခွင့်အာဏာကို လူအများက သူမ၏အမှားကို နိုးကြားလာသောကြောင့် ဖယ်ခွာသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနေရာမှ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သူမ ဝိညာဉ်ရေးရာ အခွင့်အာဏာသည် နှစ်များကြာလာသည်နှင့်အမျှ “စားသုံးရန်၊ အဆုံးတိုင်အောင် ဖျက်ဆီးပစ်ရန်” နည်းပါးလာသည်။
ထို့ကြောင့် ဤသည်မှာ လူတို့၏ စိတ်နှလုံးအတွင်း၌ ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာနေရာအတွက် ဖြစ်ပွားနေသည့် ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲကို ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်ကို နားလည်ပါ။
အထက်ဖော်ပြပါ ရက်ပေါင်း 1,260 တွင် “သန့်ရှင်းသောလူတို့၏ တန်ခိုးကို ဖြန့်ကြဲခြင်းငှာ ပြီးမြောက်သောအခါ” (ဒံယေလ ၁၂:၇)။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းသည် ဘဝများစွာအတွင်း ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်အား လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးဆောင်နေသကဲ့သို့၊ လူတို့၏ နှလုံးသားနှင့် ဘဝများတွင် ဤဝိညာဉ်ရေးစွမ်းအားများကို တန်ပြန်ရန် ကွဲပြားခြားနားသော နည်းဗျူဟာများကို အသုံးပြုရန် မာရ်နတ်က သိထားသည်။ ထို့ကြောင့် သူသည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်၏ အခွင့်အာဏာနှင့် ဝိသေသလက္ခဏာကိုသာ ခွင့်ပြုရန် ကျေနပ်နေမည့်အစား ၎င်းတို့၏ အခွင့်အာဏာနှင့် ချာ့ခ်ျအထောက်အထားကို ရှာဖွေရန် အချို့သော ပရိုတက်စတင့် ဓမ္မဆရာများကို စတင်လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် (ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့် “လျှော်တေအဝတ်ကို ၀တ်ဆင်ထား” သော ဝိညာဉ်တော်၏ သက်သေခံချက်ကို ချက်ခြင်း လိုက်နာသည်)၊ ယခု ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွဲပြားသော ပရိုတက်စတင့်အသင်းတော်များ အများအပြား ပေါ်ထွန်းလာသည်ကို တွေ့မြင်ရပြီး၊ ၎င်းတို့၏ လိုအပ်ချက်အရ Creed's ၏ တောင်းဆိုချက်အရ၊ လူသားတို့၏ အုပ်စိုးရှင်များ၊ လူတို့၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်၏ သက်ရောက်မှုများကို သတ်ပစ်ပါ။
ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသည် သမ္မာကျမ်းစာကို တရားဟောစင်တွင် သံကြိုးဖြင့် ချည်နှောင်ထားသောကြောင့် လူအနည်းငယ်က ၎င်းကိုဖတ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သူတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို မသတ်ခဲ့ကြဘဲ ဝိညာဉ်ရေးအရ လူတို့ကို ငတ်မွတ်နေရုံမျှသာဖြစ်သည်။ သို့သော် ပရိုတက်စတင့်အဖွဲ့အစည်းများသည် နှုတ်ကပတ်တော်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအသုံးပြုသော်လည်း လူတို့၏အသက်တာတွင် အပြစ်အတွက်နေရာပေးသည့် မှားယွင်းသောအယူဝါဒများနှင့် အယူဝါဒများ၏အဆိပ်ကို လိမ်လည်ထည့်သွင်းကာ ဂိုဏ်းခွဲများခွဲကာ သတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤပရိုတက်စတင့်တန်ခိုးကို အောက်ခြေမရှိသောတွင်း (ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်မှ စစ်မှန်သောဝိညာဉ်ရေးအခြေအမြစ်မရှိသည့်နေရာ) မှထွက်လာသည့် ဒုတိယသားရဲအဖြစ်ဖော်ပြသည်။ ဤသားရဲတန်ခိုးသည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဝိညာဉ်တော်၏သြဇာကိုသတ်စေသည်။
“ပြီးတဲ့အခါကျတော့ (နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်) သက်သေခံချက် ပြီးသွားသောအခါ၊ အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲက တက်သော သားရဲသည် သူတို့ကို စစ်တိုက်၍ အောင်နိုင်၍ သတ်လိမ့်မည်။ ပြီးတော့ သူတို့ရဲ့ အသေကောင်တွေ၊ (နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်၏) ငါတို့သခင် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော သောဒုံမြို့နှင့် အဲဂုတ္တုဟု ဝိညာဉ်ရေးအရ ခေါ်ဝေါ်သော မြို့ကြီး၏လမ်း၌ အိပ်ရလိမ့်မည်။ လူအမျိုးအနွယ် အမျိုးအနွယ် အမျိုးအနွယ် အမျိုးအနွယ် တို့၏ အသေကောင် တို့ကို သုံးရက်ခွဲ ကြည့်ရှု၍ သင်္ချိုင်းတွင်း၌ မထည့်ရဘဲ၊ မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတို့သည် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဤပရောဖက်နှစ်ပါးသည် မြေကြီးပေါ်မှာနေသော သူတို့ကို ညှဉ်းဆဲသောကြောင့်၊ ~ ဗျာဒိတ် ၁၁:၇-၁၀
ငါတို့သခင်သည် ယေရုရှလင်မြို့၌ လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံခဲ့သည်ကို သတိရပါ။ ထို့ကြောင့် ဤကျမ်းချက်က ဘုရားသခင်သည် သူ၏ရန်သူများကို ဝိညာဉ်မျက်စိမှ မည်သို့မြင်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ကို သိစေပါသည်။ ဝိညာဉ်ရေးအရ ကျဆုံးသွားသည့် ပရိုတက်စတင့်ချာ့ခ်ျများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ အထင်ကြီးကြသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည် နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်၏သြဇာကို သတ်ပစ်သောကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့အား သောဒုံနှင့် အီဂျစ်တို့၏ အပြစ်နှင့် နှောင်ဖွဲ့မှုကို ကိုယ်စားပြုသည့် သောဒုံနှင့် အီဂျစ်တို့အဖြစ် ဝိညာဉ်ရေးအရ မြင်သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို သတ်ကြသော်လည်း၊ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့အထဲ၌ရှိကြောင်းကို ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ “အသေကောင်များ” ကို ဝန်းရံထားကြသည်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက သူတို့ရဲ့ အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းမှာ သေဆုံးသွားတယ်။
တကယ်တော့ ပရိုတက်စတင့်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ သူတို့ရှေ့မှာ ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ချ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မကောင်းမှုမှန်သမျှကို နီးပါးလုပ်ခဲ့တယ်။ အဓိကခြားနားချက်- ပရိုတက်စတင့်ဘာသာသည် ခရစ်ယာန်များကို သူတို့ရွေးချယ်သည့်အတိုင်း ဘုရားသခင်အား ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် နည်းလမ်းမျိုးစုံကို ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ခရစ်ယာန်များကို အကြိမ်များစွာ ပိုင်းခြားထားသည်။ အဓိကအားဖြင့် အယူမှားဝါဒ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို (ဘုရားများစွာနှင့် လူတို့ကို ရှုပ်ထွေးစေသော နည်းလမ်းများစွာ) အပိုလှည့်ဖြားမှုအတွက် ခရစ်ယာန်ဝတ်ရုံဖြင့် ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ကက်သလစ်အသင်းတော်အား သားရဲတစ်ကောင်အဖြစ် သရုပ်ဖော်မည်ဆိုပါက၊ ၎င်းသည် ပရိုတက်စတင့်ဘာသာကို သားရဲတစ်ကောင်အဖြစ်လည်း သရုပ်ဖော်မည်ဆိုပါက အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ သို့သော် ကွာခြားချက်မှာ ပရိုတက်စတင့်သားရဲကို သိုးသငယ်နှင့်တူအောင် ပြုလုပ်ထားသော်လည်း အမှန်တကယ်တွင် ၎င်းမှာ အယူမှားခြင်း၏ နဂါးဝိညာဉ်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်- ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား ညွှန်ကြားထားသောကြောင့်၊ ထိုလူသည် ဘုရားသခင်ကို ညွှန်ကြားခြင်းမရှိဘဲ သားရဲထက်သာလွန်သည် (ဆာလံ 49:20 &2ပေတရု 2:12 ကိုကြည့်ပါ)။
ဤပရိုတက်စတင့်သားရဲသည် မည်သည့်နေရာမှ ဆင်းသက်လာသည်ကို သတိပြုပါ- ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အောက်ခြေမရှိသောတွင်းမှ ထွက်လာသည်။ ဤသည်မှာ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၁ တွင် အနက်ဆုံးသောတွင်းမှ တက်လာသော သားရဲသည် ဘုရားသခင်၏ သက်သေ နှစ်ဦးဖြစ်သည့် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော် တို့ကို သတ်ပစ်ရန် သတိပြုပါ။
“မြေကြီးထဲက ထွက်လာတဲ့ သားရဲတကောင်ကို ငါမြင်တယ်။ သိုးသငယ်ကဲ့သို့ ချိုနှစ်ချောင်းရှိ၍ နဂါးကဲ့သို့ ပြောတတ်၏။ ထိုသူသည် ရှေ့တော်၌ ပဌမသားရဲ၏ တန်ခိုးရှိသမျှကို ကျင့်သုံး၍ မြေကြီးနှင့် မြေကြီးသားရဲတို့ကို ကိုးကွယ်စေ၍၊ သေစေတတ်သော အနာပျောက်သော ပဌမသားရဲကို ကိုးကွယ်စေတော်မူ၏။ ကြီးစွာသောအံ့ဘွယ်သော အမှုတို့ကို ပြုတော်မူသဖြင့် လူတို့ရှေ့မှာ ကောင်းကင်ဘုံမှ မြေကြီးပေါ်၌ မီးကျစေ၍၊ သားရဲရှေ့မှာ ပြုနိုင်သော တန်ခိုးရှိသော နိမိတ်လက္ခဏာများအားဖြင့် မြေကြီးပေါ်မှာနေသော သူတို့ကို လှည့်ဖြားတော်မူ၏။ ; မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတို့အား ဓားဖြင့်ထိုး၍အသက်ရှင်သော သားရဲ၏ရုပ်တုကို လုပ်ရမည်အကြောင်း၊ သားရဲ၏ရုပ်သဏ္ဍာန်အား အသက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်သော တန်ခိုးရှိ၍ သားရဲ၏ရုပ်တုကို မကိုးကွယ်သူတိုင်း သတ်ခြင်းငှာ မြွက်ဆိုစေခြင်းငှာ၊ ~ ဗျာဒိတ် ၁၃:၁၁-၁၅
ပရိုတက်စတင့်ဘာသာ၏ ဒုတိယသားရဲသည် “ပထမသားရဲ၏အစွမ်းကို သူ့ရှေ့၌ ကျင့်သုံးသည်” ထို့ကြောင့် သူသည် ပထမသားရဲ ကက်သလစ်ဘာသာနှင့် ဆင်တူသည်။ ပဌမသားရဲကဲ့သို့ အတွင်း၌လည်း ဝိညာဉ်ရေးရာအရ တူညီသောသဏ္ဍာန်ရှိခြင်းကြောင့် ဤဒုတိယသားရဲသည် ၎င်း၏ကိုးကွယ်သူများကို ဒုတိယသားရဲအား ဂုဏ်ပြုသောအခါ “ပဌမသားရဲ” ကို ကိုးကွယ်ရန် အဓိကဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့် အံ့ဖွယ်အကြည့်ဖြင့် လှည့်ဖြားတတ်သော ဤဒုတိယသားရဲသည် သဘာဝအတိုင်းပင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတိုင်းကို ပထမသားရဲအတွက် ပုံသဏ္ဍာန်ဖန်တီးရန် ဆွဲဆောင်သည်။ ကက်သလစ်ချာ့ချ်ကဲ့သို့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာကို အတိတ်က အမှောင်ခေတ်၏ စကြဝဠာအာဏာကို ဖန်တီးရန်။ ထို့ကြောင့် ပရိုတက်စတင့်ခေါင်းဆောင်များသည် ကမ္ဘာ့ပါလီမန်/ချာ့ချ်များကောင်စီကို ပထမဆုံးဖန်တီးရာတွင် ဦးဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကုလသမဂ္ဂဖြစ်လာမည့် ပထမဆုံးနိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးကို တည်ထောင်ခြင်းဖြင့် အလားတူလုပ်ဆောင်ရန် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးခဲ့သည်။
သားရဲသဘာ၀အဖွဲ့အစည်းများ၏စိုးရိမ်မှုသည် တမန်တော်များထံ ဦးစွာပေးအပ်သောယုံကြည်ခြင်းကို နာခံခြင်းမဟုတ်ဘဲ မြေကြီးဆိုင်ရာ စွမ်းအားနှင့် ဩဇာဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့အစည်းများမှတဆင့် မြေကြီးပေါ်ရှိ မွန်မြတ်သော အရာအချို့ကို ပြီးမြောက်စေသည်ဟု သင်ခံစားရပေမည်။ ရှိတာပေါ့! သူတို့ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို တရားမျှတအောင် လုပ်ပြီး လူတွေကို သူတို့ဆီ ဆွဲခေါ်သွားတာက တခြားနည်းနဲ့။ သို့သော် ယင်းအချက်မှာ ယေရှုနှင့် ကိုယ်တော်၏နှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးထက် လူတို့ကို နာခံကိုးကွယ်ကာ ဂုဏ်တင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်တော်ကလည်း၊ သင်တို့သည် လူတို့ရှေ့မှာ ကိုယ်ကိုကိုယ် ဖြောင့်မတ်ရာသို့ ထားသောသူဖြစ်ကြ၏။ သင်တို့၏စိတ်နှလုံးကို ဘုရားသခင်သိတော်မူ၏။ အကြောင်းမူကား၊ လူတို့တွင် အလွန်ရိုသေထိုက်သောအရာသည် ဘုရားသခင်၏ ရှေ့တော်၌ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်၏။ ~ လုကာ ၁၆:၁၅
ဤဒုတိယသားရဲသည် ဘုရားသခင့်လူမျိုးကြားတွင် ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ကွဲလွဲမှုများစွာကို ပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့သည်။ လူတို့ကို သင်ကိုယ်တိုင်စုရုံးနိုင်စေရန် ပိုင်းခြားခြင်းသည် ရုပ်ပုံကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်သည် (ဘုရားသခင့်ခေါ်တော်မူခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်ထက် သင့်ကိုယ်သင်နှင့် သင့်အကြံအစည်များနှင့် အကြံဉာဏ်များကို သတ်မှတ်ပါ။)
“ထာဝရဘုရား မုန်းတီးတော်မူသော ဤခြောက်ပါးသော အရာတို့သည် စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် ခုနစ်ပါး၊ မာနကြီးသော အကြည့်၊ မုသားစကား၊ အပြစ်မရှိသော အသွေးကို သွန်းလောင်းသော လက်၊ မကောင်းသော စိတ်ကူးစိတ်သန်းကို ကြံစည်သော စိတ်နှလုံး၊ ဒုစရိုက်ကို ပြုခြင်းငှါ လျင်မြန်သော ခြေ၊ မုသာစကားကိုပြောသော မမှန်သောသက်သေ၊ ~ သုတ္တံ ၆:၁၆-၁၉
အထက်ကျမ်း၌ သခင်ဘုရားမုန်းတီးသော သတ္တမအချက်မှာ ညီအစ်ကိုတို့ကို ပိုင်းခြား၍ ကွဲပြားခြင်းမှာ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်းသည် စာတန်ကိုယ်တိုင် ကွဲပြားပြီး ရှုပ်ထွေးနေသော အယူမှားဘာသာတရားများမှတဆင့် တိုက်ရိုက်ဖန်တီးသော ဘာသာတရားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် နောက်ပိုင်းတွင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 20 တွင်၊ ပရိုတက်စတင့်သားရဲ (အခန်းကြီး 11 တွင် ကမ္ဘာမြေမှ ပေါ်ထွက်လာသည်ဟုလည်းဖော်ပြထားသည်) အမှန်တကယ်ဖြစ်နေသည်ကို ပိုမိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့ရသည်။
လူများကို အပြစ်နှင့် အယူမှားခြင်းမှ လွတ်မြောက်စေသော ဧဝံဂေလိတရား၏ တန်ခိုးကြောင့်၊ ဤဧဝံဂေလိတရားသည် စာတန်၏ အယူမှားမှုကို ချည်နှောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အယူမှားဝါဒသည် မြေအောက်သို့ ရောက်သွားရပြီး အမှောင်ခေတ်အတွင်း ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ ရင်ခွင်အောက်တွင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ရသည်။
ယင်းသည် တမန်တော်များအား ယေရှုပေးခဲ့သော ညွှန်ကြားချက်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည်။ ဧဝံဂေလိတရား၏သော့များအားဖြင့် (သမ္မာတရားကိုနားလည်သဘောပေါက်စေသော၊ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏သော့များဖြစ်ကြသည်) သည် တမန်တော်များအား မုသာကိုချည်နှောင်ရန် တန်ခိုးကိုပေးတော်မူမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။
“ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်၏သော့များကို သင့်အား ငါပေးမည်။ မြေကြီးပေါ်မှာ သင်ချည်နှောင်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ချည်နှောင်လိမ့်မည်၊ မြေကြီးပေါ်၌ သင်ဖြည်သမျှသည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ လွတ်လိမ့်မည်။” ~ မဿဲ ၁၆:၁၉
“မြေကြီးနှင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ချည်နှောင်ခြင်း” သည် စာတန်သည် ဧဝံဂေလိတရားအားဖြင့် ကမ္ဘာမြေကြီးတွင် ချည်နှောင်နိုင်ပြီး၊ သူလုပ်နိုင်သည့်အရာနှင့် လှည့်ဖြားနိုင်ပုံကို ကန့်သတ်ထားကြောင်း ဖော်ပြသည်။ သမ္မာကျမ်းစာရှိ အမှန်တရားသည် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ဘဝအပေါ် ၎င်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတစ်ဆင့် ယင်းကိုလုပ်ဆောင်သည်။ မြေကြီး၌ ချည်နှောင်ထားမည်ဆိုပါက၊ ၎င်းကို “ခရစ်တော်ယေရှု၌ ကောင်းကင်အရပ်” တွင်လည်း ချည်နှောင်ထားသည် (ဧဖက် ၂:၄-၆ ကိုကြည့်ပါ)။ ခရစ်ယာန်စစ်များသည် ဘုရားသခင်ကို ဝိညာဉ်တော်နှင့် သမ္မာတရားဖြင့် ကိုးကွယ်ရန် အတူတကွစုရုံးသောအခါ တွေ့ရှိရသည့် ကောင်းကင်နေရာဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဧဝံဂေလိတရားသည် အပြစ်၏ထိန်းချုပ်မှုမှ စိတ်ဝိညာဉ်ကို လွတ်မြောက်စေနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ဧဝံဂေလိတရားကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး အမြတ်အစွန်းအတွက် အသုံးချပြီး မှားယွင်းသောဓမ္မအမှုဖြင့် လှည့်ဖြားပါက၊ ၎င်းသည် စာတန်ကိုလည်း လွတ်မြောက်စေနိုင်သည်။ ဤသည်မှာ ပရိုတက်စတင့်တို့ ပြုလုပ်ခဲ့သော အတိအကျပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရွေးချယ်တဲ့နည်းနဲ့ ဧဝံဂေလိတရားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အသုံးပြုခဲ့တယ်။ ယင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်၊ ၎င်းတို့သည် သူအလိုရှိသည့်အတိုင်း များပြားသောနည်းလမ်းများဖြင့် လှည့်ဖြားရန် စာတန်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို လုံးလုံးလျားလျား လွတ်မြောက်စေခဲ့သည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းအဆုံးတွင်၊ စာတန်ကို မည်သို့ဖြေဖျောက်နိုင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အား အထူးရှင်းလင်းစေသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ယခင်အခန်းများတွင် ကက်သလစ်ဘာသာနှင့် ပရိုတက်စတင့်တို့၏ ရှုပ်ထွေးမှုများ ကင်းရှင်းပြီးသည်နှင့် ယခု ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး 20 တွင် ဧဝံဂေလိနေ့၏ ပိုမိုရှင်းလင်းသော ပုံရိပ်ကို တွေ့မြင်နိုင်သည်- ယေရှု ကမ္ဘာမြေပေါ် ပထမဆုံးပေါ်ထွန်းချိန်မှ အဆုံးအထိဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ယေရှုခရစ်၏ စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုတော်ကို စတင်ပြီး ဧဝံဂေလိတရားနှင့် အယူမှားခြင်းကို ချည်နှောင်ထားသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။ စာတန်သည် အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့ ချည်နှောင်ခြင်းခံရသည် (သူ၏အယူမှားဘာသာတရားများတွင် အုတ်မြစ်မရှိ၊ အောက်ခြေမရှိသောတွင်းသည် အုတ်မြစ်မရှိသောနေရာဖြစ်သည်)။ ထို့ကြောင့် စာတန်၏အယူမှားဝါဒသည် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ “လျှို့ဝှက်သောသူတို့၏စိတ်နှလုံး၌ ဝှက်ထား” သောဘာသာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသည် အယူမှားသွန်သင်ချက်များစွာကို ပေါင်းစပ်ထားသော်လည်း ယင်းတို့ကို ဖုံးအုပ်ရန် ခရစ်ယာန်သင်္ကေတများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ သို့သော် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျမှတဆင့် မည်သူမဆို မြင်သာထင်သာမြင်သာရှိသော ဘုရားကျောင်း/ဘာသာတရားတစ်ခုသာ ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ချာ့ခ်ျများစွာတွင် ပရိုတက်စတင့်၏ ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ရန် အယူဝါဒနည်းလမ်းများစွာ ပြေလျော့သွားသောအခါတွင် စာတန်၏ အယူမှားဝါဒသည် တစ်ဖန်ပြန်လည်မြင်ရသော်လည်း “ခရစ်ယာန်” ဟုခေါ်သော ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဖုံးအုပ်မှုများနှင့်။ ထို့ကြောင့် ပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းများသည် စာတန်၏ရှုပ်ထွေးမှုများကို တိုးပွားစေပါသည်။ သူတို့သည် စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များအပေါ်တွင် ဤရှုပ်ထွေးမှုများကို လွတ်မြောက်စေပြီး၊ ဘုရားသခင်၏လူစစ်များကို အပြည့်အဝတိုက်ခိုက်ရန်၊
“အောက်ခြေမရှိသောတွင်း၏သော့နှင့် သံကြိုးကြီးကိုကိုင်လျက် ကောင်းကင်ကကောင်းကင်တမန်တစ်ပါး ဆင်းသက်လာသည်ကို ငါမြင်၏။ မာရ်နတ်၊ စာတန်တည်းဟူသော ရှေးမြွေဟောင်း နဂါးကို ဖမ်း၍ အနှစ်တထောင် ချည်နှောင်လေ၏။ (မှတ်ချက်- အယူမှားခြင်းကို နှောင်ဖွဲ့ထားသည်)လူမျိုးတို့ကို နောက်တဖန်မလှည့်ဖြားစေခြင်းငှါ၊ အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲသို့ ချ၍ ချုပ်ထား၍၊ (များပြားသောဘာသာတရားများဖြင့်)အနှစ်တထောင် ပြည့်စုံသည်တိုင်အောင်၊ ထိုနောက်မှ အနည်းငယ်သော ရာသီကို လွတ်စေရမည်။ ရာဇပလ္လင်များကို ငါမြင်၍ သူတို့အပေါ်၌ ထိုင်၍ တရားစီရင်ခြင်းကို ခံရ၍၊ ယေရှု၏သက်သေအတွက်၎င်း၊ ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့်၎င်း၊ သားရဲကို မကိုးကွယ်ဘဲ၊ သူ၏ရုပ်တုသည် နဖူးပေါ်၌၎င်း၊ လက်၌၎င်း၊ ခရစ်တော်နှင့်အတူ အနှစ်တထောင် အသက်ရှင်၍ စိုးစံကြ၏။ (မှတ်ချက်- ဤအနှစ်တစ်ထောင်အတွင်း ခရစ်ယာန်စစ်များကို အဓိကအားဖြင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့သည့် ကက်သလစ်ဘာသာဖြစ်သည်။) အနှစ်တစ်ထောင်မကုန်မှီတိုင်အောင်၊ ဒါပထမဆုံး ထမြောက်ခြင်းပဲ။ ပဌမထမြောက်ခြင်း၌ပါဝင်သောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၍ သန့်ရှင်း၏။ (မှတ်ချက်- ပထမထမြောက်ခြင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် အပြစ်၏သေခြင်းမှ ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်): ဤကဲ့သို့ ဒုတိယသေခြင်းတွင် တန်ခိုးမရှိ၊ (မှတ်ချက်- ဒုတိယသေခြင်းသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသေခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမသေခြင်းသည် အပြစ်လုပ်သောအခါ ဝိညာဉ်သေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် အာဒံအား အပြစ်ပြုသောနေ့၌ သေရမည်ဟု ဥယျာဉ်၌ အာဒံအားပြောသကဲ့သို့ပင်။ ကယ်တင်ခြင်းအားဖြင့် ဒုတိယသေခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ကို မထိခိုက်စေနိုင်ပါ။) သူတို့သည် ဘုရားသခင်နှင့် ခရစ်တော်၏ ယဇ်ပုရောဟိတ်များဖြစ်ကြ၍ အနှစ်တစ်ထောင်စိုးစံကြလိမ့်မည်။ အနှစ်တစ်ထောင်ကုန်လွန်သောအခါ စာတန်သည် မိမိအကျဉ်းမှ လွတ်မြောက်ပြီး မြေကြီးလေးပုံတစ်ပုံတွင်ရှိသော ဂေါဂနှင့် မာဂေါဂတို့ကို စစ်တိုက်ရန် စုဝေးစေခြင်းငှာ လှည့်ဖြားခြင်းငှာ ထွက်သွားလိမ့်မည်။ ပင်လယ်သဲကဲ့သို့ပင်။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၀:၁-၈
1530 ခုနှစ်မတိုင်မီနှစ်တစ်ထောင် AD 530 တွင်ဧကရာဇ် Justinian သည်ရိုမန်ကက်သလစ်ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလက်အောက်တွင်ဘာသာရေးအာဏာကိုစုစည်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အေဒီ 530 မှ 534 ခုနှစ်အထိ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအား ဆန့်ကျင်သူအများအပြားအား တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအပြည့်အဝရှိစေရန်အတွက် ဥပဒေ၏ကုဒ်ဒစ်ကို ပြန်လည်ရေးသားခဲ့သည်။ ယင်းက ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏တရားဝင်အာဏာနှင့် အာဏာကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းကာ စစ်ပွဲများပင်ဖြစ်စေခဲ့သည်။ နှင့် ဤစွမ်းအားသည် နှစ်ပေါင်း ၁,၀၀၀ ခန့်တွင် သိသာထင်ရှားသော ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုမရှိဘဲ ဆက်သွားခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး 20 တွင် “ယေရှု၏သက်သေအတွက်နှင့် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ကြောင့် ခေါင်းဖြတ်ခံရသောသူတို့၏ဝိညာဉ်များကို ငါမြင်ခဲ့ရသည်” ဟုဖော်ပြထားသည်။ ကွပ်မျက်ခြင်းနည်းလမ်းသည် လူတိုင်းအတွက် ခေါင်းဖြတ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၊ ဤ “ခေါင်းဖြတ်ခြင်း” သည် အခြားသော သိမ်းပိုက်ခံရသော ဘုရင်များကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည့် နည်းလမ်းကို ထင်ဟပ်စေသည်။ ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးကို လူသိရှင်ကြား ခေါင်းဖြတ်ခြင်းဖြင့် ဘုရင်မင်းမြတ်၏ သရဖူကို ဆုံးရှုံးခဲ့ရကြောင်း လူတိုင်းအား ပြသနေပါသည်။
ယခု ကျွန်ုပ်နှင့်အတူ ဝိညာဉ်ရေးအရ စဉ်းစားပါ။ စစ်မှန်သောခရစ်ယာန်များသည် “ဘုရားသခင်၏ဘုရင်များနှင့် ယဇ်ပုရောဟိတ်များ” (ဗျာဒိတ် ၁:၆ ကိုကြည့်ပါ) နှင့် အပြစ်တရားအပေါ် တန်ခိုးအာဏာဖြင့် စိုးစံကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအနှစ် ၁,၀၀၀ အတွင်းတွင် ခရစ်ယာန်စစ်များစွာသည် မှားယွင်းစွာတရားစီရင်ခြင်းခံရပြီး “ဖြောင့်မတ်ခြင်းသရဖူကို ချွတ်ပစ်လိုက်သည်” ဟုထိုအချိန်က လူအများရှေ့တွင် လူအများရှေ့တွင် ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့သောအလေ့အကျင့်အားဖြင့်၊ ဤသူတော်စင်စစ်များသည် ဝိညာဉ်ရေးဘုရင်များမဟုတ်ကြောင်း ပုံဖော်ရန်အတွက် လူအားလုံးရှေ့တွင် “သူတို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်း၏ခေါင်းဖြတ်ခြင်း” ကိုခံခဲ့ရသည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 20 တွင် ဘုရားသခင်သည် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏တရားစီရင်ခြင်းကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြု၍ “သူတို့သည် ခရစ်တော်နှင့်အတူ အနှစ်တစ်ထောင်အုပ်စိုး၍ စိုးစံကြသည်” ဟုဆိုခြင်းဖြင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 20 တွင် ဘုရားသခင်က ထပ်လောင်းအတည်ပြုထားသည်။ လူသည် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသရဖူကို ဆောင်းထားသော ဦးခေါင်းကို ချွတ်လိုက်သော်လည်း၊ ယေရှုခရစ်သည် ၎င်းတို့အား “ခရစ်တော်နှင့်အတူ အနှစ်တစ်ထောင်စိုးစံ” သည့်နည်းဖြင့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းသရဖူကို ပိုင်ဆိုင်ဆဲအဖြစ် စီရင်တော်မူသည်။ ခရစ်တော်အတွက် ခံနေကြရသောကြောင့် ခရစ်တော်နှင့်အတူ စိုးစံကြသည်။
“သစ္စာစကားဟူမူကား၊ ငါတို့သည် သူနှင့်အတူသေလျှင် သူနှင့်အတူ အသက်ရှင်ရကြလတံ့။ ဆင်းရဲဒုက္ခခံရလျှင် သူနှင့်အတူ စိုးစံရမည်၊ ငါတို့သည် ထိုသူကို ငြင်းပယ်လျှင် သူလည်း ငါတို့ကို ငြင်းပယ်လိမ့်မည်” ဟူ၍ ၂ တိမောသေ ၂:၁၁၊ စာ-၁၂
သို့သော် ဤနှစ်တစ်ထောင်အကြာတွင် ၁၅၃၀ တွင်အဆုံးသတ်သည်- စာတန်သည် ကျဆုံးသောပရိုတက်စတင့်ဂိုဏ်းခွဲများစွာကိုဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်၊ သူ၏များပြားနေသောရှုပ်ထွေးသောဘာသာတရားများ (အဓိကအားဖြင့် အယူမှားဝါဒဖြစ်သည်) ခရစ်ယာန်ကမ္ဘာဟုခေါ်တွင်သည့်နောက်တစ်ကြိမ် လွတ်မြောက်နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ သူသည် ဤအရှုပ်အထွေးကို ထပ်ခါထပ်ခါ ထပ်ခါထပ်ခါ ထပ်ခါထပ်ခါ ပွားနေခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဧဝံဂေလိတရား၏ စင်ကြယ်သောအမှန်တရားသည် ပျောက်ဆုံးသွားသူများ၏ စိတ်နှင့်နှလုံးသားများဆီသို့ မရောက်ရှိစေရန် အထူးသဖြင့် သူလုပ်ဆောင်ပုံဖြစ်သည်။
ဒါဆို အခုထိ ကျွန်တော်တို့ ဖတ်ထားတဲ့ အရာကို ဘယ်လို အနှစ်ချုပ်ရမှာလဲ ။
အနှစ် 1,260 အတွင်း ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ပြတ်ပြတ်သားသား ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်၊ ထိုအချိန်နောက်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့်အရာများကို ဖော်ပြခြင်းဖြင့်- ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းမွန်သော ခန့်မှန်းချက်ဖြင့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဗဟိုရက်စွဲသို့ ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုနှစ်- အေဒီ ၁၅၃၀။
ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုရက်စွဲမှ နှစ် ၁,၂၆၀ သို့ နောက်ပြန်လှည့်လျှင် အေဒီ ၂၇၀ သို့ ရောက်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် AD 1530 မှ နှစ် 1,000 သို့သာ နောက်ပြန်လှည့်လျှင် AD 530 သို့ ရောက်ပါသည်။
AD 270 နှင့် AD 530 တို့သည် သမိုင်းနှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ ဖော်ပြချက်အတွင်း၌လည်း ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သော လူတော်များ ဖြစ်ပျက်နေသည့် ဝိညာဉ်ရေး အခြေအနေများအကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ထားသော ရက်စွဲများ ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသော အချိန်ကာလ၏ သတ်မှတ်ချက်များလည်း ရှိသေးသည်။
ထို့ကြောင့် AD 1530 ဝန်းကျင်တွင် ပရိုတက်စတင့်ဘာသာ၏ "မွေးဖွားခြင်း" မှ၊ ပရိုတက်စတင့်ဘာသာအားဖြင့် ဤရှုပ်ထွေးမှုများနှင့် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုအခြေအနေသည် ထင်ရှားပေါ်လွင်ထင်ရှားသည့်အသင်းတော်တစ်ခုမရှိဘဲ ၎င်းအား ဖော်ထုတ်ရန် မည်မျှကြာကြာခံခဲ့သနည်း။
“ပြီးတဲ့အခါကျတော့ (နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်) သက်သေခံချက် ပြီးသွားသောအခါ၊ အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲက တက်သော သားရဲသည် သူတို့ကို စစ်တိုက်၍ အောင်နိုင်၍ သတ်လိမ့်မည်။ ငါတို့သခင် လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ အသေခံတော်မူသော သောဒုံမြို့နှင့် အဲဂုတ္တုဟု ဝိညာဉ်ရေးအရ ခေါ်ဝေါ်သော မြို့ကြီး၏လမ်း၌ သူတို့အသေကောင်တို့သည် လဲကြလိမ့်မည်။ လူအမျိုးအနွယ် အမျိုးအနွယ် အမျိုးအနွယ် အမျိုးအနွယ် တို့၏ အသေကောင် တို့ကို သုံးရက်ခွဲ ကြည့်ရှု၍ သင်္ချိုင်းတွင်း၌ မထည့်ရဘဲ၊ မြေကြီးပေါ်မှာနေသောသူတို့သည် ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဤပရောဖက်နှစ်ပါးသည် မြေကြီးပေါ်မှာနေသော သူတို့ကို ညှဉ်းဆဲသောကြောင့်၊ ~ ဗျာဒိတ် ၁၁:၇-၁၀
သို့သော် ဤသုံးရက်ခွဲ ဝိညာဉ်ရေးအချိန်ကာလသည် ကုန်ဆုံးသွားသည်။ ကက်သလစ်အယူဝါဒနှင့် ပရိုတက်စတင့်ဘာသာနှစ်ခုစလုံး၏ ရှုပ်ထွေးမှုများထဲမှ ဘုရားသခင်ခေါ်တော်မူသော “သက်သေများ” အစုအဝေးတွင် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်သည် အပြည့်အဝ ဂုဏ်တင်ခံရသည့် အချိန်ကာလ ရောက်လာသည်။
“သုံးရက်ခွဲကြာသောအခါ၊ ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော အသက်ဝိညာဉ်တော်သည် သူတို့အထဲသို့ ဝင်၍ ခြေပေါ်၌ရပ်နေကြ၏။ မြင်သော သူတို့သည် အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ ရောက်လေ၏။ ကောင်းကင်မှ ကြီးစွာသောအသံဟူမူကား၊ ဤအရပ်သို့ လာကြလော့။ မိုဃ်းတိမ်ဖြင့် ကောင်းကင်သို့ တက်ကြ၏။ ရန်သူတို့သည် မြင်ကြ၏။ ထိုခဏခြင်းတွင် ကြီးစွာသောမြေငလျင်လှုပ်၍ မြို့၏ဆယ်စုတစုပြိုသဖြင့်၊ မြေငလျင်လှုပ်သောအခါ လူခုနစ်ထောင်သေ၍၊ ကျန်ကြွင်းသော သူတို့သည် ထိတ်လန့်၍ ကောင်းကင်ဘုံ၏အရှင်ဘုရားသခင်ကို ဘုန်းကြီးစေတော်မူ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၁:၁၁-၁၃
Harlot မြို့ (ဝိညာဏဗာဗုလုန်) ၏ဆယ်စုတစုသည် ပြိုလဲသွားသည်၊ အကြောင်းမှာ ဆယ်စုတစုသည် ဗာဗုလုန်မှထွက်လာသော စစ်မှန်သောသန့်ရှင်းသူများဖြစ်ပြီး၊ ဝိညာဏဗာဗုလုန်မှခွဲထွက်ကာ တညီတညွတ်တည်း အတူတကွရပ်တည်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် ခရစ်တော်၏စစ်မှန်သောသန့်ရှင်းသောသတို့သမီးဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏မြင်သာသောအသင်းတော်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဤဝိညာဉ်ရေးနေ့သုံးရက်ခွဲအချိန်သည် နှစ်ပေါင်း 1,260 ပြီးနောက်ဖြစ်ပျက်သည်ဖြစ်သောကြောင့် AD 1530 မှအချိန်ကြာမြင့်စွာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။ ဒီအချိန်ဟာ သုံးရက်ခွဲကာလနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထင်ကြေးတွေ အများကြီး ပေးခဲ့ပါတယ်။ အချို့က ၎င်းကို သုံးရာစုနှစ်ခွဲ သို့မဟုတ် နှစ် ၃၅၀ ခန့်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား အေဒီ ၁၈၈၀ ခန့်နေ့စွဲသို့ ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဤဝိညာဉ်ရေးရာ “၃ ရက်ခွဲ” မှကိုယ်စားပြုသောအချိန်ကြာချိန်ကို အပြည့်အဝနားလည်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသည့်ဝိညာဉ်ရေးရာဖော်ပြချက်အပြည့်အစုံကို ဆန်းစစ်ရန်လိုသည်။ ဤဝိညာဉ်ရေးရာသုံးရက်ခွဲသည် သောဒုံမြို့နှင့် အီဂျစ်ဟုခေါ်သော ဝိညာဉ်ရေးရာနေရာ၌ ဖြစ်ပျက်မည်ဖြစ်သည်။
သောဒုံမြို့သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်၏ အခြေအမြစ်မရှိသော အလွန်ဆိုးရွားသော မကောင်းမှု၏ ဝိညာဉ်ရေးရာ အခြေအနေများကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့ ခံယူနိုင်သော မကောင်းမှု၏ နက်နဲမှုသည် အဆုံးမရှိပေ။
သို့သော် အီဂျစ်သည် ဝိညာဉ်ရေးနှောင်ကြိုးကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် အစ္စရေးလူမျိုးများသည် အီဂျစ်ပြည်၌ နှစ်ပေါင်း ၄၃၀ ကြာနေထိုင်ခဲ့သည် (ထွက်မြောက်ရာ ၁၂း၄၀-၄၁)။ ယောသပ်သည် ဖာရောဘုရင်၏ ဒုတိယအုပ်ဖြစ်ပြီးနောက် ထိုနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့သွားကြသည်။ ယောသပ် အသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံး ဣသရေလလူတို့သည် အဲဂုတ္တုပြည်၌ နေထိုင်စဉ်တွင် ကျွန်ခံခြင်း မပြုခဲ့ကြပေ။
ယောသပ်သည် အသက် ၄၀ အရွယ်တွင် သူ၏မိသားစု၊ အစ္စရေးလူမျိုးအားလုံး အီဂျစ်ပြည်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နှစ် 430 နာရီမှ စတင်သည်။ ယောသပ်သည် နောက်ထပ် အနှစ် ၇၀ (အသက် ၁၁၀ တွင် ဆုံးပါးသွားခဲ့သည်။) ဣသရေလအမျိုးသားတို့သည် ယောသပ်၏အသက်တာတွင် ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် 430 – 70 = 360 ကျွန်ပြုမှု ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။ သို့သော် ယောသပ်သေဆုံးပြီး နှစ်အနည်းငယ်ကြာမှ အီဂျစ်ခေါင်းဆောင်သည် ယောသပ်၏လူမျိုးကို မလေးစားသည့်အတွက် ၁၀ နှစ်အကြာတွင် အစ္စရေးလူမျိုးများသည် ၎င်းတို့၏လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဆုံးရှုံးသွားစေရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ ယူဆနိုင်သည်။ အဲဂုတ္တုပြည်မှာ အနှစ် ၃၅၀ ကြာ ကြမ်းတမ်းစွာ ကျွန်ခံခဲ့ကြရတယ်။
ထို့ကြောင့် အီဂျစ်မှ ဝိညာဉ်ရေးအရ ကိုယ်စားပြုသည့် သုံးရက်ခွဲကို နှစ် 350 အဖြစ် ယုတ္တိကျကျ ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ အစ္စရေးတွေ အီဂျစ်ပြည်မှာ ကျွန်ခံခဲ့ရတဲ့ အချိန်နဲ့ အတူတူပါပဲ။
ပထမပရိုတက်စတင့်အယူဝါဒကို 1530 ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် ဖန်ဆင်းခဲ့ပြီး တရားဝင်လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း သတိရပါ။ ထို့ကြောင့် ဝိညာဉ်ရေးသုံးရက်ခွဲ သို့မဟုတ် နှစ် 350 ၏အစသည် စတင်ခဲ့သည်။ နှုတ်ကပတ်တော်မိန့်ဆိုသည်မှတပါး (အယူဝါဒများ သို့မဟုတ် ထင်မြင်ချက်မထည့်ဘဲ) နောက်ဆုံးတွင် ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုမှ ရပ်တည်လာသောအခါတွင် ပြီးဆုံးသွားသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဦးဆောင်မှုကိုသာ လိုက်နာရန် ဤဓမ္မအမှုကို လုံးလုံးလျားလျား သန့်ရှင်းစေပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် 1800 ခုနှစ်များနှောင်းပိုင်း၊ 1880 ခုနှစ်ဝန်းကျင် (ပထမပရိုတက်စတင့်အယူဝါဒကို 1530 တွင်တရားဝင်လက်ခံကျင့်သုံးပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း 350) တွင်ထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ရှားမှုမျိုးစတင်ခဲ့သည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် 1880 ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် စတင်ခဲ့သော ဤလှုပ်ရှားမှုသည် အလွန်လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။
သို့သော် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ရာစုနှစ်ခွဲခန့်ရှိသော ပရိုတက်စတင့်ခေတ်၏ ဤအယူအဆကို ထောက်ကူပေးနိုင်သည့် အခြားအရာများ ရှိပါသလား။
နှစ် 1,260 ကို 350 သို့မဟုတ် ထို့ထက် နှစ်များ ပေါင်းပါက၊ သင်သည် 1,610 သို့မဟုတ် နှစ် 1,600 နီးပါး ရှိလာပါသည်။ (တဖန် ဤအရာများသည် လများအမြဲတမ်း ရက် 30 မဟုတ်သောကြောင့် အနီးစပ်ဆုံး ၊ အချိန် နှင့် တစ်ဝက် အချိန် သည် နေ့ အတွက် အတိအကျ မဟုတ်နိုင် ၊ သုံးရက်ခွဲ သည် တစ်ဝက် = 50 ကို အတိအကျ မသတ်မှတ်နိုင် ပါ။ သမိုင်းဝင် နေ့စွဲများ ၏ တိကျမှု မှာ ၎င်းတို့ကို ရာစုနှစ်များစွာကြာမှ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သော သမိုင်းပညာရှင်များ၏ ကန့်သတ်ချက်များအပေါ် မူတည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရက်စွဲများသည် တစ်နှစ် သို့မဟုတ် ထိုထက်မက ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ၎င်းတို့သည် အလွန်နီးစပ်သော ခန့်မှန်းခြေများဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် သမိုင်းတစ်လျှောက် သိရှိထားသည့် ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများနှင့် ၎င်းတို့ကို တန်းစီလိုက်သောအခါတွင် အလွန်နီးစပ်ပါသည်။) ကျွန်ုပ်တို့၏ ရက်စွဲများကို သတ်မှတ်နိုင်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ နားလည်မှုတွင် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် သမိုင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသော ရက်စွဲများ၏ တိကျမှု အကန့်အသတ်များသာဖြစ်သည်။ သို့သော် အချိန်ကို ဘုရားသခင်နားလည်ခြင်းသည် ပြီးပြည့်စုံသည်။
စကားမစပ်၊ 1,600 သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုသတ်မှတ်ထားသော နောက်ထပ်အရေးကြီးသောနံပါတ်ဖြစ်သည်။
“ကောင်းကင်တမန်သည် မိမိတံစဉ်ကို မြေကြီးထဲသို့ ထိုး၍ မြေကြီး၏စပျစ်နွယ်ပင်ကို စုသိမ်း၍ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ထွက်ရာ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းထဲသို့ ချပစ်လိုက်၏။ မြို့ပြင်၌ စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းသည် နင်းမိသဖြင့်၊ အသွေးသည် တထောင်ခြောက်ရာဖာလုံအကွာတွင် မြင်းဇက်ကြိုးများအထိ၊ ~ ဗျာဒိတ် ၁၄:၁၉-၂၀
ဤဝိညာဉ်ရေးစပျစ်ရည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ယေရှုဦးစွာယူဆောင်လာချိန်မှစ၍ ဤဝိညာဉ်ရေးစပျစ်သီးနယ်ရာကို နင်းချေခြင်းမှာ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပါသည်။ ဟောပြောခဲ့သော ဧဝံဂေလိတရားသည် ကြောင်သူတော်ယောင်ဆောင်ခြင်းအတွက် ၎င်းတို့၏သွေးအပြစ်ကို ဝိညာဉ်အား ဖော်ပြသည်။ သို့သော် “၁၆၀၀ ဖာလုံ” ရှိသည့်နေရာအတွက် “စပျစ်သီးနယ်ရာဇာ” တရားဟောခြင်းအား ယေရုရှလင်မြို့သစ်ဖြစ်သည့် ခရစ်တော်၏စစ်မှန်သောသတို့သမီးဖြစ်သည့် ယေရုရှလင်မြို့သစ်ဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်၏ အပြင်ဘက်တွင် ဟောပြောခြင်းပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
စပျစ်သီးနယ်ရာကျင်းကို ငါတစ်ယောက်တည်း နင်းမိပြီ။ ငါနှင့်အတူရှိသောလူတို့တွင် တယောက်မျှမရှိ၊ ငါသည် အမျက်ထွက်၍ သူတို့ကိုနင်း၍၊ သူတို့အသွေးသည် ငါ့အဝတ်ပေါ်မှာ ဖြန်း၍၊ ငါ့အဝတ်ရှိသမျှကို စွန်းထင်းစေမည်။ အကြောင်းမူကား၊ အပြစ်ပေးသောနေ့သည် ငါ့စိတ်နှလုံး၌ရှိ၍၊ ငါရွေးနှုတ်သောနှစ်သည် ရောက်လေပြီ။ ငါကြည့်၍ ကူညီစရာလူမရှိ၊ ထောက်ထားစရာမရှိဟု ငါအံ့ဩမိ၏။ ထို့ကြောင့် ငါ့လက်ရုံးသည် ငါ့ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်စေ၏။ ငါ့ဒေါသသည် ငါ့ကို ထောက်မ၍၊ ငါသည် အမျက်ထွက်၍ လူတို့ကို နင်းချေ၍၊ အမျက်ထွက်၍ ယစ်မူးစေသဖြင့်၊ သူတို့၏ ခွန်အားကို မြေကြီးပေါ်သို့ ငါချပေးမည်။" ~ ဟေရှာယ ၆၃:၃-၆
ဟေရှာယရှိ ဤကျမ်းပိုဒ်၏အကြောင်းအရာသည် လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့် ဖောက်ပြန်ခြင်းများစွာအလယ်တွင် ဘုရားသခင်အတွက် လူတစ်ဦးကို သန့်စင်စေခြင်းနှင့်လည်း သက်ဆိုင်သည်။ ဘယ်လိုလဲ? မှားယွင်းသော သွန်သင်ချက်များနှင့် မှားယွင်းသောဝတ်ပြုရေး၏ ဖောက်ပြန်ခြင်းကို နင်းချေခြင်းဖြင့်၊ ဗျာဒိတ် ၁၄:၂၀ တွင် အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ယေရုရှလင်မြို့သစ် (ထင်ရှားပေါ်လွင်သောအသင်းတော်) ၏အကူအညီမပါဘဲ၊ ဘုရားသခင်သည် “အကွာအဝေးတစ်ထောင်ခြောက်ရာဖာလုံ” အတွက် အလုပ်ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ သို့မဟုတ် နှစ်ပေါင်း 1,600 ၏နေရာအတွက် - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် AD 270 မှ AD 1880 အထိ ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျများ အုပ်စိုးချိန်အတွင်း ပရိုတက်စတင့်အသင်းတော်များနှင့်အတူ၊
သို့သော် ဖာလုံသည် အချိန်မဟုတ်ဘဲ အကွာအဝေးကို တိုင်းတာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီတော့ ဒီအချိန်ကို သမိုင်းမှာ ဘယ်လိုအသုံးချနိုင်မလဲ။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း အာရှရှိအသင်းတော် ခုနစ်ခုအကြောင်း ရှင်းလင်းချက်ကို ကျွန်ုပ်နားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် ဦးစွာ ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့ အချိန်ဇယားကို အကျဉ်းချုပ်အနေနဲ့ ဦးစွာပထမ ဦးစွာ ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ ပြင်ဆင်ရပါမယ်။ ၎င်းကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှ လိပ်မူထားသော အာရှရှိ အသင်းတော် ခုနစ်ခု၏ အမည်များဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော ခရစ်ယာန်ခေတ် ခုနစ်ခုဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်းသည် အသင်းတော်ခုနစ်ခုမှပြောသော “ဧဝံဂေလိတရားခုနစ်ရက်” နှင့် ရင်းနှီးစေမည်ဖြစ်သည်။ အဲဒါပြီးရင်၊ အချိန်ကို သတ်မှတ်ဖို့ အကွာအဝေးကို ဘယ်လိုသုံးသလဲဆိုတဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ရှင်းပြချက်က ပိုပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိပါလိမ့်မယ်။
အာရှအသင်းတော်ခုနစ်ခု (ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၂ နှင့် ၃)
ပထမဦးစွာ အာရှတိုက်ရှိ အသင်းတော်ခုနစ်ခုထံ ပေးပို့ရန် ယေရှုက ယောဟန်အား ညွှန်ကြားသည့်စာများ၏ အစီအစဥ်အစီအစဥ်တွင် တွေ့ရမည့် ယေဘူယျပုံစံအကျဉ်းကို ဦးစွာမှတ်သားပါ။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး 1 တွင်ဖော်ပြထားသော ယောဟန်နှင့် ပထမဆုံးအပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုတွင် ခရစ်တော်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများစွာနှင့် အသွင်အပြင်များ ထွက်ပေါ်လာသည်။ အသင်းတော်ခုနစ်ပါးထံ ပေးစာများတွင် စာလုံးတိုင်းသည် ယေရှု၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများထဲမှ တစ်ခုကို ထပ်ခါတလဲလဲဖြင့် စတင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သခင်ယေရှုသည် အသင်းတော်၏ နေရာတိုင်း၊ ခေတ်တိုင်းတွင်၊
ပေးစာတစ်ခုစီ၌လည်း ယေရှုသည် အသင်းတော်တစ်ခုစီအား သူ၏သတိပေးချက်ကို ဂရုမစိုက်ပါက နောက်ဘာဖြစ်လာမည်ကို ပြောပြသည်။ နောက်အသင်းတော်စာတွင် (ဗျာဒိတ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အစီအစဥ်အရ) တွင်ယခင်အသင်းတော်အား ယေရှုသတိပေးခဲ့သည့်အရာသည် ယခင်အသင်းတော်နောက်တွင် ယခုချာ့ခ်ျတွင် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။ အရင်က ကြိုပြောထားခဲ့တဲ့အရာက တကယ်ပဲ နောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်လာမှာပါ။
ထို့ကြောင့်၊ ဤအစီအစဥ်တွင်ဖော်ပြထားသော ဤအသင်းတော်ခုနစ်ခုသည် အမှန်တကယ်တွင် ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည် ။
ဗျာဒိတ်တော်သည် ဝိညာဉ်ရေးသတင်းစကားဖြစ်ပြီး အသင်းတော်တစ်ဝိုက်ရှိ ဝိညာဉ်ရေးအခြေအနေများကို ထုတ်ဖော်ပြသကာ အသင်းတော်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည် အလွန်ပြည့်စုံသော သတင်းစကားဖြစ်သည်- ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ပုံစံခုနစ်မျိုးဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည်။ ခုနစ်ခုသည် “ပြီးပြည့်စုံခြင်း” ကိုကိုယ်စားပြုသော နံပါတ်တစ်ခုအဖြစ် သမ္မာကျမ်းစာတစ်ခွင်တွင် လူသိများသည်။ ထို့အပြင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဘုရားသခင့်လူမျိုးအပေါ် အရေခြုံမှု၏လွှမ်းမိုးမှုကို လုံးဝဖျက်ဆီးရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။ ထိုလှည့်စားသော ကြောင်သူတော်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို “ဗာဗုလုန်” ဟုခေါ်သော မကောင်းသောဝိညာဉ်ရေးမြို့ (ဝိညာဉ်ရေးပြည်တန်ဆာအခြေအနေ) အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ခုနစ်ခုမြောက်များစွာ၏ပုံစံသည် ဗာဗုလုန်၏ဝိညာဉ်ရေးအမာခံကိုဖော်ထုတ်ပြီးအနိုင်ယူရန် ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲအစီအစဉ်တစ်ခုနှင့်တူသည်။
သို့သော် ဤထိတွေ့မှုကို ပြီးမြောက်စေရန်နှင့် လူများ၏ စိတ်နှင့် စိတ်နှလုံးအပေါ် သူမ၏ လှည့်စားသော အမာခံနေရာကို ဖျက်ဆီးရန်အတွက်၊ ဘုရားသခင်သည် ဓမ္မဟောင်းတွင် ချမှတ်ထားသည့် ပုံစံအတိုင်း လိုက်နာသော ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် အစီအစဉ်တစ်ခု ရှိပါသည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်သည် အကြိမ်များစွာ ထပ်တလဲလဲပြောသည်- သမ္မာကျမ်းစာ၏ ကျန်ရှိသောပုံစံများ၊ သင်ခန်းစာများနှင့် အမျိုးအစားများ။ ယင်းက ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို ကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီပေးပါသည်။ သို့သော် သမ္မာကျမ်းစာသည် ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာစာအုပ်ဖြစ်သောကြောင့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို ဝိညာဉ်ရေးအရ အသုံးချရမည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ “စစ်မြေပြင်” ကို အသင်းတော်ခုနစ်ပါးထံ ပေးစာဖြင့် ဦးစွာဖော်ပြသည်။ ထို့နောက်၊ ချာ့ခ်ျခေတ်ပုံစံခုနစ်ခုကိုအခြေခံ၍ ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွင်းတွင် တိုက်ခိုက်ရန်အစီအစဥ်ကို လုပ်ဆောင်သည်။
ဤဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲအစီအစဉ်သည် ယေရိခေါမြို့ကိုအနိုင်ယူရန် ဓမ္မဟောင်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သည့် အလားတူပုံစံအတိုင်းဖြစ်သည်။ ယေရိခေါမြို့သည် ဘုရားသခင်၏လူမျိုး၊ ဣသရေလလူတို့လိုက်သော တံတိုင်းကြီးမြို့ဖြစ်သည်။ သူတို့သည် “ကတိထားရာပြည်” သို့ နောက်ထပ်မသွားနိုင်မီ ယေရိခေါမြို့ကို အနိုင်ယူခဲ့ကြရသည်။ ထို့ကြောင့် ယေရိခေါမြို့ရိုးပြိုကျစေရန် ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို အလွန်တိကျသောအကြံအစည်တစ်ခု ပေးခဲ့သည်။
ဤသည်မှာ သူတို့သည် ထိုအချိန်က လိုက်နာခဲ့သော ဘုရားသခင်၏ အစီအစဉ်ဖြစ်သည် (ယောရှု အခန်းကြီး ၆ မှ)။
တံပိုးမှုတ်သော ယဇ်ပုရောဟိတ် ခုနစ်ယောက်၊ စစ်သူရဲအပေါင်းတို့နှင့်တကွ ဓမ္မသေတ္တာကို ကိုင်ဆောင်လျက်၊
ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ သူတို့သည် ထိုနည်းတူပြုသော်လည်း၊
သတ္တမအကြိမ် (သတ္တမနေ့) ပြီးနောက် ယဇ်ပုရောဟိတ် ခုနစ်ပါးတို့သည် နောက်ဆုံး ကျယ်လောင်၍ ရှည်လျားသော ပေါက်ကွဲသံကို တီးခတ်ကြသည်။
ထိုအခါ လူအပေါင်းတို့သည် မြို့ရိုးတဘက်၌ အမျက်ထွက်၍ ကြွေးကြော်ကြ၏။
ပြီးတော့ နံရံတွေ အကုန်လုံး ပြိုကျသွားတယ်။
ယေရိခေါမြို့ကို ဝင်တိုက်၍ ဖျက်ဆီးကြ၏။ မြို့တော်၏ အဖိုးတန်သတ္တုများကိုသာ ဖယ်ထုတ်ရန် ညွှန်ကြားထားသည်။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးကို ဖျက်ဆီးပြီး မီးရှို့ရမယ်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် အလားတူအစီအစဥ်တစ်ခုရှိသည် - လူတို့၏စိတ်နှလုံးနှင့် ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်၏လှည့်ဖြားသောအမာခံနေရာကို အနိုင်ယူရန်-
တံဆိပ်ခုနစ်ခု (ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၆ တွင် စတင်သည်)၊ ခရစ်ဝင်ကျမ်းနေ့၏ အသင်းတော်ခေတ်တစ်ခုစီအတွက် တစ်ခုစီအတွက် တစ်ခု။ (ယေရိခေါမြို့တဝိုက် ချီတက်သကဲ့သို့၊ တစ်နေ့လျှင် တစ်ကြိမ်၊ ခြောက်ရက်မြောက် “တံဆိပ်ခတ်ခြင်း” ဝိညာဉ်ရေးနေ့အတွက်။)
သတ္တမတံဆိပ် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၈ တွင် စတင်သည်) တွင် တံပိုးခုနစ်ခုကို ကောင်းကင်တမန်ခုနစ်ပါးက တံပိုးမှုတ်ကြသည်။ (ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့၌ ယေရိခေါမြို့သို့ ချီတက်သောနေ့၌ ခုနစ်ကြိမ်ကဲ့သို့။)
သတ္တမတံပိုးမှုတ် (ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၁ တွင်စ၍) တွင် “ဤလောက၏နိုင်ငံတို့သည် တိုင်းနိုင်ငံ သို့မဟုတ် ငါတို့၏သခင်ခရစ်တော်၏ တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်ကြပြီး၊ ကမ္ဘာအဆက်ဆက် စိုးစံရလိမ့်မည်” ဟူသော ကြေငြာချက်ပါရှိသည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၁း၁၅) ဓမ္မ၏အုတ်တံကိုတွေ့မြင်ရသည် (ယေရိခေါမြို့ကိုစစ်တိုက်ရာတွင်ရှိသကဲ့သို့)၊ ဤအရာအားလုံးသည် ရှည်လျားကျယ်လောင်သောသတင်းစကား (ယေရိခေါမြို့ကိုတိုက်သောနောက်ဆုံးတံပိုးမှုတ်ခြင်းကဲ့သို့) ချက်ခြင်းနောက်လိုက်ခဲ့သည်။ ဤရှည်လျားသောပေါက်ကွဲမှု/သတင်းစကားသည် သားရဲ၏နိုင်ငံများနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည် (သားရဲ၏အမှတ်အသား – ၎င်း၏အမည် 666) – ဗျာဒိတ် ၁၂ နှင့် ၁၃ ကိုကြည့်ပါ
ဗျာဒိတ်ကျမ်း 14 တွင် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်နေကြသော စစ်မှန်သောလူမျိုးတော် (နဖူးတွင် ခမည်းတော်၏နာမတော်ပါရှိသည်) နှင့် “ဗာဗုလုန်ပြိုလဲပြီ…” ဟူသော တန်ခိုးကြီးသော သတင်းစကား ကောင်းကင်တမန် (ယေရှုခရစ်) က ကြေငြာခဲ့သည်
ထို့နောက် ဗျာဒိတ်ကျမ်း ၁၅ နှင့် ၁၆ တွင် နောက်ဆုံးဘေးဒဏ် ခုနစ်ချက်ပါသည့် ကောင်းကင်တမန်ခုနစ်ပါးကို ၎င်းတို့သွန်းလောင်းသော ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်အမျက်တော်နှင့် ပြည့်နေသော ပုလင်းများကို တွေ့ရသည် (ယေရိခေါမြို့တဘက်၌ ဣသရေလလူတို့ကို ဒေါသတကြီး အော်ဟစ်သံကဲ့သို့)၊
ဒေါသအမျက် ပုလင်းများထဲမှ သွန်ချခြင်း ပြီးသောအခါတွင် အကြီးမားဆုံးသော ဝိညာဉ်ရေးငလျင်ကြီး နှင့်...
“မြို့ကြီးသည် သုံးပိုင်းခွဲ၍ တိုင်းနိုင်ငံတို့၏မြို့များ ပြိုလဲသဖြင့်၊ မဟာဗာဗုလုန်သည် ပြင်းစွာသော အမျက်တော်အရှိန်၏ စပျစ်ရည်ခွက်ကို ပေးဆောင်ရန် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ အောက်မေ့ခြင်းသို့ ရောက်လေ၏။ (ဗျာဒိတ် ၁၆:၁၉)၊
ဗာ​ဗု​လုန်​ရဲ့​လှည့်​စား​မှု​တံ​တိုင်း​တွေ ပြို​ကျ​လာ​ပြီ။ သူမ၏ သြဇာကို လုံးလုံးလျားလျား ဖျက်ဆီးရန် အချိန်တန်ပြီ ။
ဒီမှာ တစ်ခု ဗျာဒိတ်ကျမ်း ခြုံငုံသုံးသပ်ချက် စာမျက်နှာတစ်မျက်နှာ အထက်ပါအချက်ကို နားလည်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်တံပိုး၊ တံပိုးများနှင့် ပုလင်းများကို အသုံးပြုရသည့် အကြောင်းရင်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
ဖျံခုနစ်ခု ယေရှုခရစ်သည် “ဘုရားသခင်၏အသေခံသောသိုးသငယ်” (ဗျာဒိတ် ၅ ကိုကြည့်ပါ) ဖွင့်လှစ်သောအရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အသွေးတော်အားဖြင့် ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသောသူများသာ သူဖွင့်ထားသည်ကို မြင်နိုင်သည် (နိကောဒင်သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကိုမြင်ရန် တဖန်မွေးဖွားရန် လိုအပ်သည်ဟု နိကောဒင်က မိန့်ကြားခဲ့သည်—ယောဟန် ၃း၃-၈ ကိုကြည့်ပါ)။ တံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဘုရားသခင်၏စစ်မှန်သောလူများကို အချိန်မရွေးရင်ဆိုင်ရမည့် ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲများကို သိနိုင်စေရန်၊ အထူးသဖြင့် သီးခြားအသင်းတော်ခေတ်တစ်ခုစီတွင်ဖြစ်သည်။
တံပိုးခုနစ်လုံး သခင်ယေရှုသည် ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောလူတို့ကို သတိပေးရန် အသင်းတော်ခေတ်တိုင်းတွင် သူ၏စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုတော်ကို ပေးဆောင်သည့်အရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးချာ့ခ်ျခေတ်တွင်၊ ဘုရားသခင်၏သားသမီးများကို တဖန်သတိပေးရန်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးတိုက်ပွဲအတွက် တစ်ကိုယ်တည်းအဖြစ် ၎င်းတို့ကို စုရုံးစေရန်။ မှတ်ချက်- ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် လူများကို သတိပေးရန်နှင့် စစ်တိုက်ရန်အတွက် စုရုံးရန် တံပိုးများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
ဘု​ရား​သ​ခင်​၏​အ​မျက်​တော်​ရှိ​သော​အ​မှု​တော်​၏​ဖန်​လုံး ခုနစ်​လုံး တကယ်တော့ အသင်းတော်ခေတ်တစ်ခုစီနဲ့လည်း ကိုက်ညီပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် တံဆိပ်ခုနစ်ခုနှင့် တံပိုးမှုတ်ကောင်းကင်တမန်ခုနစ်ပါးတို့မှ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော ဝိညာဉ်ရေးရာအခြေအနေတိုင်းအပေါ်၌ နောက်ဆုံးဝိညာဉ်ရေးရာတရားစီရင်ခြင်းမှ သွန်းလောင်းခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဤအရာအားလုံး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ- အထူးသဖြင့် နောက်ဆုံးဝိညာဉ်ရေးနေ့တွင်၊ ဝိညာဉ်ရေးအရမြင်လိုသူမည်သူမဆိုအမှန်တရားကိုမြင်နိုင်စေရန်၊ အလွန်တောက်ပသောဝိညာဉ်ရေးအလင်းရောင်ကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
“ထိုမှတပါး၊ လ၏အလင်းသည် နေ၏အလင်းကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ သခင်ဘုရားသည် မိမိလူတို့ကို ဖြိုခွဲ၍ ချမ်းသာပေးတော်မူသောနေ့၌၊ ခုနစ်ရက်ပတ်လုံး အလင်းကဲ့သို့ ခုနစ်ဆဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်။” ~ ဟေရှာယ ၃၀:၂၆
ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသောဒဏ်ရာများကို အသင်းတော်အား ကုသရန်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်- တံဆိပ်ခုနစ်ခု၊ တံပိုးခုနစ်ခု၊ နှင့် ဘုရားသခင်၏အမျက်တော် ခုနစ်ပုလင်းတို့၏ တိုက်ပွဲအစီအစဉ်မှလွဲ၍ပင်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းစာတစ်ခုလုံးသည် အမှန်တကယ်ပင် ပြောပြသည်။ ကွဲပြားသောရှုထောင့် ခုနစ်ခုမှ ခုနစ်ကြိမ် ကွဲပြားသော ခရစ်ဝင်ကျမ်းနေ့ ဇာတ်လမ်း! တဖန်၊ ဘုရားသခင်သည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွင်း သမိုင်းဆိုင်ရာသင်ခန်းစာများကို သင်ကြားရန် သူ၏ရည်ရွယ်ချက်၏ ပြည့်စုံမှုနှင့် သေချာမှုကိုပြသရန် ခုနစ်နှစ်ဖြင့် အရာများကို လုပ်ဆောင်သည်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွင်းမှာ ခုနစ်စုံသုံးစုံရဲ့ တိုက်ပွဲအစီအစဥ်အကျဉ်းချုပ်ပါ။အာရှရှိ ခရစ်ယာန်အသင်းတော် ခုနစ်ခုမှ ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော ခရစ်ယာန်ခေတ် ခုနစ်ဆက်အတွင်း စုစည်းထားသော အသင်းတော်အားလုံး.
ထို့ကြောင့် ယခု၊ ခုနစ်ခုသုံးပါး၏ တိုက်ပွဲအစီအစဉ်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် တစ်ဦးချင်းစီ၏ တံဆိပ်များ၊ တံပိုးများနှင့် ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ဖန်ပုလင်းများကို နားလည်သည်- ချာ့ခ်ျခေတ်တစ်ခုနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ ထိုစကားဖြင့်၊ သမိုင်းနှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းနှစ်ခုစလုံးတွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဧဝံဂေလိနေ့၏ အချိန်ဇယားကို ဖြတ်သန်းကြစို့။
ပိုကြီးစေရန် "ကလစ်" ပုံ
အေဒီ ၃၃ - ပထမအသင်းတော်ခေတ်အစ- ဧဖက်
ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့မှစ၍ - အသင်းတော်သည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ တန်ခိုးဖြင့် ထွက်လာသည်။
သို့သော် လာမည့်ရာစုနှစ်များဆီသို့ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ လူအများအပြားသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘဲ လူနောက်သို့သာ လိုက်လာကြသည်။
ပထမအသင်းတော်သို့ပေးစာ၊ ဧဖက် (ဗျာဒိတ် ၂း၁-၇) ဖော်ပြသည်။
သင်သည် မှန်ကန်သောအရာများကို လုပ်ဆောင်နေသော်လည်း မှန်ကန်သော အကြောင်းပြချက်များအတွက် မဟုတ်တော့ဘဲ၊ သင်သည် လူတို့ကို နှစ်သက်စေရန် ဦးစွာလုပ်ဆောင်နေပါသည်၊ သင်သည် သင်၏ ပထမဆုံး ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ထားရစ်ခဲ့သည်- ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်သည်။
နောင်တရပါ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်သည် မီးလောင်နေသောဆီဖြင့် မြင်နိုင်ရန် ဝိညာဉ်ရေးအလင်းရောင်ပေးသော ကျွန်ုပ်၏ဆီမီးခုံကို ဖယ်ရှားလိုက်မည်ဖြစ်ပြီး၊ အသင်းတော်ရှိလူတိုင်းအတွင်း လုပ်ဆောင်နေသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ စုပေါင်းမေတ္တာကို ကိုယ်စားပြုပါသည်။
ပထမတံဆိပ်ကိုဖွင့်ခြင်း (ဗျာဒိတ် ၆:၁-၂) ဖော်ပြသည်။
မိုးခြိမ်းသံ - ဧဝံဂေလိတရား၏လျှပ်စီးကြောင်းသည် ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏အစတွင်ပြုလုပ်သကဲ့သို့၎င်း၏ခွန်အားဖြင့် ဦးစွာထွက်ပေါ်ခဲ့သောကြောင့်၊
သခင်ယေရှုသည် သရဖူကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး မြင်းဖြူ (စစ်ပွဲ၏သင်္ကေတ) စီးနင်းပြသထားသည်။ သူသည် “အောင်နိုင်၍ အောင်နိုင်” ရန် ထွက်သွား၏။ (မှတ်ချက်- ယေရှု၏စစ်ပွဲသည် ဝိညာဉ်ရေးအရမဟုတ်ဘဲ၊ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောဇာတိပကတိဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏တိုက်ပွဲသည် ဝိညာဉ်များကိုကယ်တင်ရန် ဧဝံဂေလိတရား၏လုပ်ဆောင်မှုဖြင့် တိုက်ပွဲဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။) မြင်းဖြူသည် ယေရှုခရစ်၏ စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုဆောင်များကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ ရှေးခေတ်ဘုရားသခင့်ပရောဖက်များ (ဧလိယနှင့်ဧလိရှဲ) ကို “ဣသရေလ၏ရထားနှင့် မြင်းစီးသူရဲများ” ဟုခေါ်သည် (၂ ဓမ္မရာဇဝင် ၂:၁၂ နှင့် ၂ ဓမ္မရာဇဝင် ၁၃:၁၄ ကိုကြည့်ပါ)။
ပထမတံပိုး (ဗျာဒိတ် ၈:၇) သတိပေးသည်-
ဧဝံဂေလိတရားစီရင်ခြင်းသတင်းတရားသည် အသွေး (မိုးသီးနှင့်မီး) (သင့်အား သန့်ရှင်းစေပြီး အပြစ်ကင်းစေသောအသွေး သို့မဟုတ် သင်လက်ခံသည်ဖြစ်စေ မလက်ခံသည်ဖြစ်စေ အပြစ်ရှိခြင်းအပေါ် မူတည်၍) ဟောပြောနေပါသည်။
မြေကြီးပေါ်ရှိ ဖြောင့်မတ်ခြင်းသစ်ပင်၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် မရှင်သန်နိုင်ပါ။ မြက်ပင်အားလုံး (ယေဘူယျအားဖြင့် အပြစ်ရှိသော လူသားများကို ကိုယ်စားပြုသည်) သည် သတင်းစကားကြောင့် လောင်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်သည် (ဧဝံဂေလိတရားအမှန်တရားကို ငြင်းပယ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်)။
ဘုရားသခင်၏ကွပ်မျက်ခံရသောအမျက်တော်၏ပထမပုလင်း (ဗျာဒိတ် ၁၆:၂) တရားသူကြီးသည်
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မြေကြီးပေါ်ရှိလူများသည် ဘုရားသခင်ထက် သားရဲနှင့်တူသောနိုင်ငံများကို ကြောက်ရွံ့ရိုသေရန် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသောကြောင့် မြေကြီးပေါ်တွင် အမျက်ဒေါသသွန်းလောင်းခဲ့သည်။
ဤတရားဟောတရားစီရင်ခြင်း၏အမှန်တရားသည် သားရဲနှင့်တူသောလူသားတို့အတွက် နာကျင်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် လောကီသားအားလုံးအပေါ်၌ ဆူညံသော (နာကျင်ရွံရှာဖွယ်) ဝေဒနာသည် ကျရောက်သည်။ (မှတ်ချက်- ဗျာဒိတ် ၈:၇ တွင် ပဌမတံပိုးခရာကို ကောင်းကင်တမန် တီးမှုတ်သောအခါ၊ သစ်ပင်အားလုံး၏ သုံးပုံတစ်ပုံ၊ စိမ်းလန်းသောမြက်ပင်များ မီးလောင်ခံရပြီး ဖြောင့်မတ်သည်ဟု ထင်ရသူတို့အပေါ် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် ဟောပြောခြင်း၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ပြသသည် (သစ်ပင်များ၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရား) နှင့် အပြစ်ရှိသောသူများ (မြက်ပင်) တို့ကို ဖန်ပုလင်းများထဲမှ သွန်ချခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏ တရားစီရင်ခြင်း၏ နောက်ဆုံး ပြီးမြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြေကြီးသည် တစ်ကြိမ်သာ ကျန်တော့သည် သစ်ပင်များနှင့် မြက်ပင်များအားလုံး မီးလောင်သွားပါသည်။: မြေကြီးသား အပေါင်းတို့သည် မှန်ကန်သော အယူဝါဒ တရားကို မဟောဘဲ သည်းမခံနိုင်စေရန် ဒေါသ-ပုလင်းများ၏ နောက်ဆုံး စီရင်ချက်၌ ငါတို့ကို ပြတော်မူပါ။)
AD 270 – ဒုတိယအသင်းတော်ခေတ်အစ- Smyrna
ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကို အီဂျစ်နိုင်ငံ၌ အန်တိုနီ (အေဒီ ၂၇၀) က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး သာသနာတော်၏ အသက်ကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ (၎င်းသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာအထိ ယိုယွင်းနေသောအသင်းတော်အခြေအနေကို ဖုံးကွယ်ရန် အပြင်ပန်း “ဘုရားဝတ်ပြုခြင်းပုံစံ” အသစ်ဖြစ်လာသည်။)
ပထမအကြိမ် (အေဒီ ၂၇၂ တွင်) ချာ့ခ်ျခေါင်းဆောင်များသည် ပြည်တွင်းအငြင်းပွားမှုကို ရောမဧကရာဇ်တစ်ပါးအား အဆုံးအဖြတ်ပေးရန် (တမန်တော်ပေါလုသည် ကောရိန္သုမြို့သားတို့အား ၎င်း၏ပထမစာစောင်တွင် အထူးတလည် သွန်သင်ဆုံးမခဲ့သည်။) ယင်းသည် မြေကြီးနှင့်အာဏာရရှိရန် မိတ်ဖက်များရှာဖွေသည့် အသင်းတော်ခေါင်းဆောင်မှု၏အစဖြစ်လာသည်။ ခေါင်းဆောင်များ။
ချာ့ခ်ျခေါင်းဆောင်အာဏာနေရာချထားခြင်း၏ လာမည့်ရာစုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတွင် ချာ့ခ်ျခေါင်းဆောင်များသည် အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ကြပြီး ပထဝီဝင်အနေအထားအရ လူတို့၏နိုင်ငံများကို ပိုင်းခြားကြသည်။
ဒုတိယအသင်းတော်သို့ပေးစာ၊ Smyrna (ဗျာဒိတ် ၂း၈-၁၁) ဖော်ပြသည်။
ယခုအခါ ခရစ်ယာန်စစ်များကြားတွင် ခိုးဝင်သောခရစ်ယာန်အတုများ အများအပြားရှိနေပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကို “စာတန်၏တရားဇရပ်” ဟုခေါ်သည်။ (မှတ်ချက်- ဆီမီးခုံကို ဖယ်ရှားလိုက်သောအခါတွင် မည်သူသည် ဝတ်ပြုရာနေရာသို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရန် သင့်တွင် အလင်းအလုံအလောက် မရှိတော့ပါ။)
Smyrna သည် အနာဂတ်တွင် ၎င်းတို့သည် ကြီးစွာသောညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းကို ခံရမည်ဖြစ်ပြီး သေခြင်းတရားကို သစ္စာစောင့်သိရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
ဒုတိယတံဆိပ်ကိုဖွင့်ခြင်း (ဗျာဒိတ် ၆း၃-၄) ဖော်ပြသည်။
ဧဝံဂေလိ လျှပ်စီးကြောင်းမှ မိုးခြိမ်းသံ မရှိတော့ပါ၊ (ဆီမီးခုံ၏ အလင်းရောင်ကို ဖယ်ရှားလိုက်သောကြောင့်)
မြင်းသည် အနီရောင်ပြောင်းသွားသည် (သွေးအပြစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်) ဖြစ်၍ ယေရှုသည် ၎င်းကို မစီးပါ။ ငြိမ်သက်ခြင်းကို ဖယ်ထုတ်ရန် “ဓားကြီး” (ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အလွဲသုံးစား) အသုံးပြုသော မြင်းစီးသူသစ်တစ်ဦး ရှိပြီး၊ ထို့ကြောင့် လူများ အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ကြပြီး ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန် ကျမ်းဂန်များကို အသုံးပြုကြသည်။
ဒုတိယတံပိုး (ဗျာဒိတ် ၈း၈-၉) သတိပေးသည်-
ဘုရားကျောင်း (ပူလောင်သောမေတ္တာဖြင့်) ဘုရားကျောင်းဖြစ်ခဲ့ဖူးသော တောင်ကြီးသည် လူများ၏ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်သို့ ဆင်းသက်လာကာ (ထိုနေရာတွင် မီးငြိမ်းသွားသည်)။ ထို့အတွက်ကြောင့်၊ ပင်လယ်၌အသက်ရှင်ခဲ့သော ဝိညာဉ်များ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် ယခုအခါ အပြစ်ရှိသောသွေး-အပြစ်ကြောင့် သေဆုံးသွားကြပြီ။
ဘုရားသခင်၏ကွပ်မျက်ခံရသောအမျက်တော်၏ဒုတိယပုလင်း (ဗျာဒိတ် ၁၆:၂) စီရင်သည်–
ယခု ပင်လယ်တစ်ခုလုံး လူတွေ ဧဝံဂေလိတရားကို အပြည့်အ၀ မတုံ့ပြန်သော သူသည် သွေး-အပြစ်ဖြင့် သေဆုံးသွားခဲ့သည် (ဒုတိယတံပိုးမှုတ်မှုကဲ့သို့ သုံးပုံတစ်ပုံမျှသာမဟုတ်)။ သင်သည် ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံး၊ စိတ်၊ စိတ်၊ ခွန်အားနှင့် အကြွင်းမဲ့ ဝတ်ပြုရမည် - သို့မဟုတ် လုံးဝမလုပ်ပါ။ ထို့ကြောင့် သင်သည် လောကီလူသားများ (ဘာသာရေးအရဖြစ်စေ၊ အခြားနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ) လောကီပင်လယ်နှင့် ရောနှောချင်သေးပါက၊ သင်သည် ထိုနေရာတွင် ဝိညာဉ်ရေးအရ မုချသေလိမ့်မည်။
အေဒီ 530 - တတိယချာ့ခ်ျခေတ်အစ- Pergamos
အေဒီ 530 တွင် ဧကရာဇ် Justinian သည် ရောမဆရာတော် (ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး) ကို အခြားသူများအားလုံးထက် ရောမမြို့ရှိ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ ဘိုးဘေးများထံမှ အယူခံဝင်ခြင်း၏ အခွင့်အာဏာကို ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Pope Boniface II (ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး 530 မှ 532) သည် Julian ပြက္ခဒိန်ရှိ နှစ်များ၏ ရေတွက်ခြင်းကို Ab Urbe Condita မှ Anno Domini သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ (“…အချိန်နှင့် ဥပဒေများကို ပြောင်းလဲရန် စဉ်းစားပါ…” ~ ဒံယေလ ၇:၂၅)
533 ခုနှစ် ဇွန်လ6ရက်နေ့တွင် ဘုရင် Justinian သည် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးအား အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအားလုံးကို အုပ်စိုးရမည့်အပြင် ဆရာတော်အားလုံးက သူ့ကို ဦးခေါင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသင့်ကြောင်း ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးထံ စာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့သည်။
AD534 - Justinian သည် ၎င်း၏ ရောမဥပဒေ စုစည်းမှုအသစ်တွင် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ရိုမန်ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ အခွင့်အာဏာကို ချထားပေးသည်။ ဤဥပဒေသစ်ကုဒ်ဒက်စ်သည် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျတွင်မပါဝင်ဘဲ နိုင်ငံသားဖြစ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပေ။ ၎င်းသည် အယူမှားခြင်း၏ ကြိုးစားမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး အယူမှားကိုးကွယ်သူများကို လူသတ်မှုအဖြစ် တံဆိပ်ကပ်ကာ ကက်သလစ်ဘုန်းကြီးများအား အထူးအခွင့်အရေးများပေးခဲ့သည်။
သမ္မာကျမ်းစာသည် သာမန်လူများ သိရှိခြင်းမှ ကင်းဝေးစေရန် တရားဟောစင်တွင် သံကြိုးဖြင့် ချည်နှောင်ထားပြီး ဘုန်းကြီးများက ၎င်းကို လူများအကျိုးအတွက် အသုံးချနိုင်စေပါသည်။
တတိယအသင်းတော်သို့ပေးစာ၊ Pergamos (ဗျာဒိတ် 2:12-17) ဖော်ပြသည်။
စာတန်သည် ခရစ်ယာန်စစ်များစုဝေးရာနေရာများကြားတွင် အခွင့်အာဏာနေရာတစ်ခုကို တည်ထောင်ထားပြီး ခရစ်ယာန်စစ်များသည် နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခြင်းနှင့် သတ်ခြင်းခံရခြင်းတို့ကို ခံနေကြရသည်၊ ချာ့ခ်ျတွင် မှန်ပါသည်။ (Smyrna ကိုသတိပေးခံရသောညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုရောက်လာလိမ့်မည်။)
မိစ္ဆာအယူဝါဒများကို ဓမ္မဟောင်း ဗာလမ်၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် နည်းလမ်းအရ “ဣသရေလအမျိုးသားတို့ရှေ့မှာ ထိမိ၍လဲ့စေခြင်း၊ ဗာလမ်သည် မြေကြီးဆိုင်ရာ ဘုရင်နှင့်အတူ မြေကြီးဆိုင်ရာ စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် တန်ခိုးကို လိုချင်သောကြောင့် ထိုသို့ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ (ကက်သလစ် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး၊ ကာဒီနယ်များနှင့် ဆရာတော်များကဲ့သို့ပင်။)
ထို့အပြင်၊ နီကိုလာတန်၏ အယူဝါဒကို စွဲကိုင်ထားသူများ (အဘယ်အရာကိုမဆို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ ကောင်းမှု သို့မဟုတ် မကောင်းမှု)၊ ဘုရားသခင်မုန်းတီးသောအရာကို စွဲကိုင်ထားသူများလည်း ရှိသည်။ (ကက်သလစ်အသင်းတော်သည် အယူမှားခြင်းမှ သယ်ဆောင်လာသော အယူဝါဒအမျိုးမျိုးကို ရောနှောကာ နှစ်သက်လာမည်ဖြစ်သည်။)
နောင်တရခြင်းမရှိပါက၊ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်သော ငါ့နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ငါတိုက်မည်။
တတိယတံဆိပ်ကိုဖွင့်ခြင်း (ဗျာဒိတ် ၆း၅-၆) ဖော်ပြသည်။
ယခုမြင်းသည် ဝိညာဉ်ရေးအမှောင်ထုဖြင့် မည်းမှောင်သွားလေပြီ။
မြင်းနက်စီးသူသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကျိုးအတွက် နှုတ်ကပတ်တော် (ဝိညာဉ်အစာ) ကို ချိန်ဆကာ အစာရေစာပြတ်လပ်သောပြည်၌ ဝိညာဉ်ရေးအစာခေါင်းပါးခြင်းဖြစ်လေ၏။ ဝိညာဉ်ရေးအရ အသက်မရှင်နိုင်လောက်အောင်ပင် လုံလောက်သောအမှုတော်ကို ထမ်းဆောင်နေပါသည်။
တတိယတံပိုး (ဗျာဒိတ် ၈း၁၀-၁၁) သတိပေးသည်-
ကျဆုံးသွားသော ကက်သလစ်ဘုန်းကြီး (“ဒေါန” ဟုခေါ်သော ခါးသီးသောကြယ်အဖြစ် ကိုယ်စားပြု) သည် လူတို့သောက်သုံးရန် ပေးကမ်းသော ဝိညာဉ်ရေးရေများပေါ်သို့ ကျသွားသည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့သည် ခါးနာခြင်း (ရေ၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် ခါးသီးပြီး အပြစ်ဖြစ်လာကြသည်)။ စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုဖြင့် ဟောပြောသော နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဝိညာဉ်တော်၏ရေသည် အသက်နှင့် ကုသခြင်းကို ယူဆောင်လာမည်ဟု ယေရှုမိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သို့သော် ကက်သလစ်ဘုန်းကြီးယူဆောင်လာသော ရေများသည် ခါးသီးလှသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းကို ကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်သောကြောင့်၊ ဖြောင့်မတ်သူများကို ညှဉ်းဆဲသတ်ဖြတ်ခြင်းအား အကြောင်းပြရန်ပင်။ ထို့အတွက်ကြောင့်၊ များစွာသော ဝိညာဉ်များသည် ၎င်းတို့၏ စိတ်နှလုံးတွင် ခါးသီးလာပြီး ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးသွားကြသည်။
ဘုရားသခင်၏ကွပ်မျက်ခံရသောအမျက်တော်၏တတိယဖန်ပုလင်း (ဗျာဒိတ် ၁၆:၄-၇) စီရင်သည်–
မြစ်တွေ စမ်းရေတွေ ပေါက်နေပြီ။ လူအပေါင်းတို့သည် အသွေးဖြစ်သဖြင့်၊ (တတိယတံပိုး၌ သုံးပုံတစ်ပုံသာ ထိခိုက်သည်)။ တရားစီရင်ခြင်းပုလင်းကို သွန်းလောင်းသော စစ်မှန်သောတမန်က “အိုထာဝရဘုရား၊ ကိုယ်တော်သည် ဖြောင့်မတ်တော်မူ၏၊ အကြောင်းမူကား၊ သူတို့သည် သန့်ရှင်းသူတို့နှင့် ပရောဖက်တို့၏အသွေးကို သွန်းလောင်း၍ သောက်စရာအသွေးကို ပေးတော်မူပြီ။ အကြောင်းမူကား၊
ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့အား သွေးဖြင့် အပြစ်စီရင်ခဲ့ပြီး၊ ခံစားခဲ့ရသော သူ၏စစ်မှန်သော သန့်ရှင်းသူများကိုယ်စား လက်စားချေခဲ့သည်။
AD 1530 - စတုတ္ထချာ့ခ်ျခေတ်အစ - သွာတိရ
ပုံနှိပ်တိုက်နှင့် သမ္မာကျမ်းစာ၏ ဒေသန္တရဘာသာပြန်များကို အသုံးချခြင်းဖြင့် စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုဆောင်များသည် ဧဝံဂေလိတရား၏အမှန်တရားကို ပိုမိုဖြန့်ကျက်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ စစ်မှန်သောဧဝံဂေလိတရားနှင့်ပတ်သက်သော ဤကျမ်းဂန်အသိပညာသည် 1500 ခုနှစ်များအတွင်း ထွက်ပေါ်လာသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားမှုကို လှုံ့ဆော်ရန် သော့ချက်ဖြစ်သည်။
ပရိုတက်စတင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားများက ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျ၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကို ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခြင်းဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး စတင်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို ၎င်းတို့၏လမ်းညွှန်အဖြစ်သာ အသုံးပြုမည့်အစား၊ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် Creed ကို စတင်ဖန်တီးပြီး ၎င်းတို့၏အသင်းတော်ဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို ပုံဖော်ကြသည်။
ပထမဆုံးသီးခြားအသင်းတော်အထောက်အထားကို Augsburg Confession ဖြင့် 1530 တွင်စတင်သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ခရစ်ယာန်များကို ကွဲပြားသောကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ယုံကြည်ချက်များစွာဖြင့် ပိုင်းခြားကာ နောက်ပိုင်းတွင် နောက်ထပ်များစွာ လိုက်ပါလာမည်ဖြစ်သည်။
ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်၏တိုက်ရိုက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို သတ်ပစ်ရန်ဖြစ်ပြီး၊ လူသားများအနေဖြင့် နှုတ်ကပတ်တော်များစွာကို အကျိုးရှိစေရန် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းအသုံးပြုကာ ၎င်းတို့၏မြေကြီးဆိုင်ရာအသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းများကို ချုပ်ကိုင်ကာ ခွင့်ပြုခြင်းထက် ၎င်းတို့ကိုတည်ဆောက်ရန် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်သည် ဘုရားသခင်၏ တစ်ခုတည်းသော နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်ခြင်းကို ညွှန်ကြားသည်။
စတုတ္ထအသင်းတော်ထံပေးစာ (ဗျာဒိတ် ၂း၁၈-၂၉)၊ သွာတိရဖော်ပြသည်-
ယခုအခါ ဧဝံဂေလိတရားအားထုတ်မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်၊ အကြောင်းမှာ ပေရဂမုတ်မြို့၌ သခင်ယေရှုက ကက်သလစ်အသင်းတော်၏အခွင့်အာဏာကို “နှုတ်တော်ထွက်ဓား” ဟူသော ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့် တိုက်ထုတ်မည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် သင်၌ ပရောဖက်ပြုနိုင်သော ဝိညာဉ်ရေးယေဇဗေလဖြစ်သောကြောင့် သွာတိရနှင့် ပြဿနာကြီးကြီးမားမားရှိတော်မူသည်။ သူမသည် Pergamos ကိုမလုပ်ရန်သတိပေးခဲ့ဖူးသောတူညီသောအရာအချို့ကိုပြုလုပ်နေသည်။ ယေဇဗေလဝိညာဉ်သည် သင်တို့ကို ပိုင်းခြား၍ စစ်မှန်သောဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် သင်တို့တွင်လုပ်ဆောင်နေသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကို သတ်ပစ်မည့် မှားယွင်းသောအယူဝါဒများကို မိတ်ဆက်ပေးသောကြောင့် ငါသတိပေးပါသည်။
ဒါကို မပြင်ဘူးဆိုရင်၊ မင်းရဲ့ ဝိညာဉ်ရေး နွယ်ဖွားတွေဟာ ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးပြီး နောက်မျိုးဆက် အများစုဟာ ဝိညာဉ်ရေးအရ သေဆုံးသွားလိမ့်မယ်။
စတုတ္ထတံဆိပ်ကိုဖွင့်ခြင်း (ဗျာဒိတ် ၆း၇-၈) ဖော်ပြသည်။
ယခုတော့ စစ်မြင်းသည် အနည်းငယ် လင်းလာသော်လည်း မီးခိုးရောင် အရိပ်များ ရောနှောကာ အရောင်ဖျော့သွားစေသည်။ “သေခြင်းနှင့်ငရဲ” ဟူသော ဤမြင်းနောက်သို့လိုက်သော ဝိညာဉ်တစ်ခုရှိသည်။
ဤမြင်းစီးသူသည် ယခင်က မြင်းနီနှစ်ကောင်နှင့် မြင်းနက်တို့ ပါရှိသည်။ သို့မှသာ သူသည် ဓားဖြင့် သတ်နိုင်သည် (ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း) နှင့် မွတ်သိပ်စွာ သတ်နိုင်သည် (ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော် အလုံးစုံကို လူတို့ကို မကျွေးမွေးဘဲ) သတ်နိုင်သည်။
ထို့အပြင်၊ ဤမြင်းသည် ၎င်း၏ဆိုးညစ်သောအမှုကို ပြီးမြောက်စေရန် ကမ္ဘာမြေကြီးရှိ လူသားနှင့်တူသော သားရဲနိုင်ငံများကို လွှမ်းမိုးနိုင်ကာ သေခြင်းနှင့် ငရဲသည် ဤမြင်းနောက်သို့ လိုက်သွားနိုင်သည်။
“…မြေကြီးလေးတစုအပေါ်မှာ ထားဘေး၊ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှု၊ သေဘေးနဲ့ မြေကြီးသားရဲတွေနဲ့အတူ သတ်ခြင်းငှာ တန်ခိုးကို ပေးတော်မူပြီ။” ~ ဗျာဒိတ် ၆:၈။
ပရိုတက်စတင့်အသင်းတော်များသည် မြေကြီး၏လေးပုံတစ်ပုံခန့်ကို ဝန်းရံထားသည်မဟုတ်လော။
စတုတ္ထတံပိုး (ဗျာဒိတ် ၈း၁၂) သတိပေးသည်-
နေ၊ လနှင့် ကြယ်တို့၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် မှောင်မိုက်သွားပြီ။ ယင်းတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးရာများကို ကိုယ်စားပြုသည်-
နေသည် ဓမ္မသစ်ကျမ်း (မှန်သောအလင်း) ကို ကိုယ်စားပြုသည်
လသည် ဓမ္မဟောင်းကျမ်းကို ကိုယ်စားပြုသည် (နေ၏အလင်းရောင်အချို့ကို ထင်ဟပ်စေသည်)
ကြယ်များသည် အမှုဆောင်လုပ်ငန်းကို ကိုယ်စားပြုသည် (ဗက်လင်မြို့ကြယ်ကဲ့သို့၊ စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုသည် လူတို့ကို ယေရှုထံပို့ဆောင်လိမ့်မည်)
ဒါဆို အဲဒီထဲက သုံးပုံတစ်ပုံလောက် မှောင်သွားတဲ့အခါ ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ ယုံကြည်ချက်များနှင့် လူတို့ကို ကွဲပြားသော ဂိုဏ်းဂဏများအဖြစ် ပိုင်းခြားပေးသည့် အခြားသော အယူအဆများနှင့် အစီအစဉ်များ ရောထွေးလာသည်။)
ဘုရားသခငျ၏ကွပ်မျက်ခံရသောအမျက်တော်၏စတုတ္ထဖန်ပုလင်း (ဗျာဒိတ် 16: 8-9) တရားသူကြီးများ:
ယခုတွင် ဘုရားသခင်သည် ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တွင် မှတ်တမ်းကို တည့်တည့်ပြန်တင်ထားပါသည် (စတုတ္ထတံပိုးမှုတ်ပြီးနောက် နှုတ်ကပတ်တော်သုံးပုံတစ်ပုံကို မှောင်မိုက်သွားကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်)။ ယခု ဘုရားသခင်သည် စစ်မှန်သောဓမ္မအမှုတစ်ခုကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်မီးဖြင့် ဘိသိက်ပေးထားပြီး၊ သန့်ရှင်းသောနေ၏ တောက်ပမှုအပြည့်ဖြင့် (ဓမ္မသစ်ကျမ်း၏ စစ်မှန်သောအလင်းတန်း) ဖြင့် ရှင်းလင်းသောအမှန်တရားနေ၏ ဤမီးတောက်လောင်သောတရားဟောခြင်းသည် ဘာသာရေးအရေခြုံမှုတွင် သေဆုံးသွားသော လူတို့ကို လောင်မြိုက်စေပါသည်။ အမှောင်ထု၏ သုံးပုံတစ်ပုံ၏နောက်ကွယ်တွင် ပုန်းအောင်းမနေနိုင်တော့သောကြောင့် ဘုရားကျောင်းများဖြစ်သည်။
“စတုတ္ထကောင်းကင်တမန်သည် သူ၏ဖန်ပုလင်းကို နေပေါ်၌ သွန်းလောင်း၍၊ မီးရှို့သောသူတို့အား တန်ခိုးကို ပေးတော်မူ၏။ လူတို့သည် ပြင်းစွာသောအပူရှို့ခြင်းသို့ ရောက်၍၊ ဤဘေးဒဏ်များကို အုပ်စိုးတော်မူသော ဘုရားသခင်၏ နာမတော်ကို ကဲ့ရဲ့ရှုတ်ချကြသဖြင့်၊ ဂုဏ်တော်ကို မချီးမွမ်းဘဲ နောင်တရကြ၏။” ~ ဗျာဒိတ် ၁၆:၈-၉
AD 1730 – ပဉ္စမမြောက် ချာ့ခ်ျခေတ်အစ-သာဒိ
ပရိုတက်စတင့်အသင်းတော်အများအပြားကို အနှစ် 200 နီးပါးစတင်တည်ထောင်ပြီးနောက်တွင်၊ လူတို့သည် ၎င်းတို့၏အသင်းတော်ဆက်နွှယ်မှုတွင် အခြေချနေထိုင်လာခဲ့ကြသည့် ကျော်ကြားသောဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ငြိမ်သက်မှုတစ်ခုရှိလာသော်လည်း၊ သို့သော် အပြစ်၏ရုန်းကန်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုသည် ၎င်းတို့၏ဘဝတွင်အလုပ်လုပ်ဆဲဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ မတူညီသောပရိုတက်စတင့်အသင်းတော်အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတွင် အများစုသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသော်လည်း လူတိုင်းသည် ကယ်တင်ခြင်းခံရသော်လည်း တစ်ချိန်က တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်တွင် အပြစ်ကျူးလွန်ရမည့်အရာ (ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျနှင့်ဆင်တူသော ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်) လွှမ်းမိုးနေသော မှားယွင်းသောအယူဝါဒရှိကြသည်။
ဤလွှမ်းမိုးနေသော ဝိညာဉ်ရေးသေခြင်း၏အလယ်တွင်၊ သူတို့၏ဘဝတွင် မြင့်မြတ်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းခြင်း၏ သာ၍အမှန်တရားအတွက် ဘုရားသခင်ကို စတင်ရှာဖွေသော လူအုပ်စုငယ်များ စတင်ရှိလာသည်။ သမိုင်းတွင် “ကြီးစွာသောနိုးထခြင်း” ဟုခေါ်သော ဤကာလအတွင်း အပြစ်ကို ရှုတ်ချသော တရားဟောဆရာများစွာရှိသော်လည်း ၎င်းတို့ထဲမှ အနည်းငယ်ကသာ လူတို့ကို သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော် ဖြည့်သွင်းခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းသောအသက်တာသို့ လုံးလုံးလျားလျား ဦးဆောင်နေပါသည်။ ဤဓမ္မတရားဟောဆရာအနည်းငယ်ထဲမှ အချို့ကို Moravians နှင့် John & Charles Wesley နှင့် Methodist လှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆက်စပ်သူများတွင် တွေ့ရှိရသည်။
ပဉ္စမအသင်းတော်သို့ စာ၊ သာဒိ (ဗျာဒိတ် ၃း၁-၆) ဖော်ပြသည်။
သခင်ယေရှုက သွာတိရမြို့၌ သူတို့ကိုသတိပေးခဲ့ရာ ယခုဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်– “သင်တို့တွင် အသက်ရှင်၍သေပြီ” ဟူ၍ ခရစ်တော်နှင့်အတူ အထောက်အထားပြသော်လည်း သင်၏အပြစ်များတွင် အသေခံနေဆဲဖြစ်သည်။ သင်ကျန်ခဲ့သော ယုံကြည်ခြင်းနှင့် အမှန်တရားကို ခိုင်ခံ့စေပါ။ အသင်တို့၏ အမှုတော်များကို ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ (သန့်ရှင်းသောအားဖြင့်) ပြီးပြည့်စုံအောင် ငါမတွေ့ခဲ့ပါ။ အပြင်မှာ ဘာပဲဖြစ်နေနေ မင်းနှလုံးသားထဲမှာ ဘာရှိလဲ ငါသိတယ်။
နိုးထဖို့ လိုတယ်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မင်းမရှိရင် မင်းမမျှော်လင့်ထားတဲ့ တစ်နာရီအတွင်း မင်းဆီ ငါလာမယ်။
မိမိတို့၏ဝိညာဉ်ရေးအဝတ်အစားများကို မညစ်ညူးစေသော ပုဂ္ဂိုလ်အနည်းငယ်ရှိပါသေးသည်။
ပဉ္စမတံဆိပ်ကိုဖွင့်ခြင်း (ဗျာဒိတ် ၆း၉-၁၁) ဖော်ပြသည်။
ရှေးယခင်က နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုများကြောင့် ယဇ်ပလ္လင်အောက်၌ ယဇ်ပူဇော်သော အသက်ပေါင်းများစွာ ရှိသည်။ (ယဇ်ပလ္လင်အောက်ရှိ ပြာများသည် ၎င်းတို့၏ခရစ်ယာန်သက်သေခံချက်အတွက် အသေခံခဲ့ကြသူများကို ဝိညာဉ်ရေးအရ ကိုယ်စားပြုပါသည်။) ဤညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများသည် ယခင်တံဆိပ်သုံးခုဖြစ်သည့် မြင်းနီ၊ မြင်းနက်နှင့် မြင်းဖျော့သုံးကောင်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဝိညာဉ်ရေးအရ ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသသောအရာမှာ ဘုရားသခင်သည် သူတို့ကို သတိရပြီး သူတို့၏မျက်ရည်များဖြစ်သည်။ ယဇ်ပလ္လင်အောက်ရှိ ဤသူတို့သည် သတ်သော ရန်သူတို့ကို လက်စားချေရန် ဘုရားသခင်ထံတော်၌ အသံကိုလွှင့်နေကြသည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်းတို့အား အချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင် စောင့်ရန် အမိန့်ပေးတော်မူသည်၊ ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်တရားစီရင်ခြင်းအချိန်ရောက်လာပြီ (ဆဋ္ဌမတံဆိပ်ခတ်ခြင်း၏အဖွင့်တွင် စတင်လာသည်)။
ပဉ္စမတံပိုး (ဗျာဒိတ် ၉း၁-၁၁) က သတိပေးသည်-
“အပြစ်တရား၏သေခြင်း၏တစွန်းတစ်စ” ကိုဟောကြားခြင်းဖြင့် အနက်ဆုံးသောတွင်းနက်သတင်းကိုဖွင့်ပေးသည့် ကြယ်တစ်ပွင့်ဓမ္မအမှုတစ်ခုရှိသော်လည်း၊ ဝိညာဉ်များကို အပြစ်မှလုံးဝကယ်နုတ်ရန် လိုအပ်သောအမှန်တရားအပြည့်အစုံကို မဖြည့်ဆည်းပေးပေ။ ထို့ကြောင့် ဝိညာဉ်ရေးအရ အသားကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ထားပုံ (သို့မဟုတ် ဇာတိပကတိလူကို သတ်ခြင်း) ကို ရှာဖွေနေကြသော်လည်း မတွေ့ကြပေ။ ထို့ကြောင့် ပြိုလဲသွားသော ကြယ်သတင်းစကားသည် “သေခြင်း၏တုပ်” (ကင်းမြီးကောက်တုပ်သကဲ့သို့ နာကျင်စေသည်) ဖြင့် နားထောင်သူများ၏ကိုယ်ကိုကိုယ်သိစိတ်အား နာကျင်စေသော်လည်း သက်သာရာရရန် လမ်းစကို မပို့ဆောင်ပေ။ သူတို့၏အကျင့်များသည် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ပြီးပြည့်စုံခြင်း (သန့်ရှင်းခြင်း၌) မတွေ့ရှိရပါ။ အမှန်တရားကိုပြသနိုင်တဲ့ စစ်မှန်တဲ့နိုးကြားမှုရှိတဲ့ ဓမ္မဆရာအနည်းငယ်ကို သူတို့ရှာဖို့လိုတယ်။
မှတ်ချက်- ဤဓမ္မအမှု၏တရားဟောချက်သည် ကြားနာသူများ၏သြတ္တပ္ပစိတ်ကို နာကျင်စွာထိခိုက်စေမည်ဖြစ်ပြီး၊ အပြစ်တရားအတွက်သေခြင်း သို့မဟုတ် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ဇာတိပကတိကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာဖြတ်ခြင်းနည်းလမ်းအပြည့်အစုံကို ၎င်းတို့အားပြသမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် ဤနာကျင်သော “ထိတ်လန့်ခြင်း” သည် လာမည့်အသင်းတော်ခေတ်အထိ “ငါးလ” သို့မဟုတ် ဝိညာဉ်ရေးရက်ပေါင်း 150/နှစ်အထိ ဆက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
“ထိုသူတို့အား မသတ်ဘဲ ငါးလပတ်လုံး ညှဉ်းဆဲခြင်းကို ခံစေခြင်းငှာ၊ လူကို ကင်းမြီးကောက်ညှဉ်းဆဲသော အခါ ကင်းမြီးကောက်၏ ညှဉ်းဆဲခြင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ရ၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၉:၅
ဘုရားသခင်ကွပ်မျက်ခံရသောအမျက်တော်၏ပဉ္စမပုလင်း (ဗျာဒိတ် ၁၆း၁၀-၁၁) တရားသူကြီးများသည်
ပုလင်းကို သားရဲ၏ အခွင့်အာဏာ၏ ခုံပေါ်၌ သွန်းလောင်းသည်။ သားရဲ၏ အခွင့်အာဏာသည် အတွင်း၌စိုးစံသော ဘုရားသခင်၏ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မပါဘဲ လူသားတို့၏ သားရဲသဘာဝအတွင်းတွင် ပါရှိသည်။ ပဉ္စမပုလင်း၏ ရှင်းလင်းချက်သည် ရိုးသားသူတို့အား လုံး၀သန့်ရှင်းမှုရနိုင်စေသည်၊ သို့မှသာ ၎င်းတို့၏သဘောသဘာဝသည် အတွင်းသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မျက်မှောက်တော်မှ ဘုရားဖြစ်လာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ဤဇာတိပကတိ၊ ဇာတိသားရဲသဘာဝသည် သားရဲနှင့်တူသော “ခရစ်ယာန်ဘာသာ” ကို ကိုးကွယ်ကြသူများ၏ နှလုံးသားထဲတွင် နေရာထိုင်ခင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့သည် အပြစ်ရှိသောသားရဲနှင့်တူသော သဘာဝအတိုင်း ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည် (အပြစ်ရှိသောလူအိုကို လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာ ရိုက်ခတ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားသခင်၏သဘောသဘာဝနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ နှင့် သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဖြည့်သွင်းခြင်း နှင့်။) ဧဝံဂေလိတရား အပြည့်အစုံကို ဟောကြားသောအခါ၊ စစ်မှန်သော သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်၏ ဖြည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့် စိတ်နှလုံး၌ သန့်ရှင်းခြင်း ပါဝင်သည်။ အတွင်းသန့်ရှင်းမှုကို မလိုလားသူများ၊ ဤသတင်းစကားသည် အလွန်နာကျင်သော အနာများကို ဖြစ်စေသည်။ သူတို့၏ဝိညာဉ်ရေးနာကျင်မှုတွင်၊ သက်သာရာရရန် ဘုရားသခင်ကိုရှာမည့်အစား ၎င်းတို့သည် ဘုရားသခင်အား ပုတ်ခတ်ပြောဆိုခြင်းဖြင့် (ဘုရားသခင်နှင့် သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်ကို မရိုမသေပြောဆိုခြင်း) လျှာကိုအသုံးပြု၍ ဤဖန်ပုလင်းသည် မှားယွင်းသောဓမ္မအမှုအပေါ် ဘုရားသခင်၏ ဒဏ်ပေးမှုဖြစ်သည် (ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ပဉ္စမတံပိုးမှုတ်သော ကောင်းကင်တမန်အားဖြင့်) သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်ခြင်းအတွက် သမ္မာတရားအပြည့်အစုံကို မဟောဘဲ၊ ဤမှားယွင်းသောဓမ္မအမှုသည် အခြားသူများကို အဆိပ်သင့်စေသော နာကျင်ကိုက်ခဲသော ကင်းမြီးကောက်များ တုပ်သည့်အတွက် ဘုရားသခင်၏ လက်စားချေခြင်းဖြစ်သည်။
AD 1880 – ဆဋ္ဌမမြောက် ချာ့ခ်ျခေတ်အစ- Philadelphia
ကက်သလစ်ချာ့ချ်မှ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုသမိုင်းအပြင်၊ ယခုအခါ ပရိုတက်စတင့် ကွဲပြားမှုများနှင့် ရှုပ်ထွေးသော အယူဝါဒများကို နောက်ထပ် နှစ်ပေါင်း ၃၅၀ မှတ်တမ်းအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ရည်ရွယ်ချက်ကို စိတ်အားထက်သန်စွာတပ်မက်ခဲ့ကြသောခရစ်ယာန်များသည် စိတ်နှလုံးနှင့်အသက်တာတွင် စစ်မှန်သောသန့်ရှင်းခြင်းအတွက်နှင့် ဂိုဏ်းဂဏများ၏နံရံများပြိုလဲရန်အချိန်ရောက်ပြီဟု ယုံကြည်လာကြသည်။ ဧဝံဂေလိတရား အပြည့်အ၀ သန့်ရှင်းမှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှုဆီသို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ လှုပ်ရှားမှု စတင်လာသည်၊ “ငါ၏လူဗာဗုလုန်မြို့မှ ထွက်လာလော့” ဗျာဒိတ်သတင်းစကားနှင့်အတူ ကြီးထွားလာသည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၈:၄)
ထို့ကြောင့်၊ “ခရစ်ယာန်ဘာသာ” အတုတွင် အရေခြုံ အလိမ်အညာများကို ဆန့်ကျင်သည့် အကြီးကျယ်ဆုံးသော အမှန်တရားတိုက်ပွဲများထဲမှတစ်ခု စတင်ကျင်းပတော့မည်ဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ်ကျမ်းအပါအဝင် သမ္မာကျမ်းစာမှ ရှင်းလင်းသောအမှန်တရားကို ဟောပြောခြင်းခံရသော ဘိသိက်ခံဓမ္မအမှုသည် အကျင့်ပျက်ခြစားသော ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများစွာကို ဖော်ထုတ်ခံရသည်။
လူများစွာသည် ၎င်းတို့၏ မှားယွင်းသောအယူဝါဒများနှင့် ကွဲပြားသောအသင်းတော်အထောက်အထားများ၏ ရင်ခွင်အောက်တွင် ပြေးလွှားပုန်းအောင်းရန် ရွေးချယ်ကြပြီး အမှန်တရားအပြည့်အစုံကို ဟောပြောမည့်သူများနှင့် ဝေးဝေးနေရန် ရွေးချယ်ကြသည်။
ဆဋ္ဌမအသင်းတော်၊ Philadelphia (ဗျာဒိတ် ၃း၇-၁၃) မှဖော်ပြသည်။
သာဒိမြို့မှ ၀ိညာဉ်ရေးရာအဖြူရောင်အဝတ်အစားများဝတ်ဆင်ထားသူများသည် ယခု Philadelphia တွင်ရှိကြသော ကောင်းကင်မှုတ်သွင်းခြင်းပြတင်းပေါက်များကို ၎င်းတို့အားဖွင့်ထားခဲ့ကြပြီး၊ ယေရှုမှတပါး အခြားမည်သူမျှ ထိုတံခါးကို မပိတ်နိုင်ပေ။
စာတန်၏တရားဇရပ်မှ ထွက်ခွာသွားသော မည်သူမဆို (စမုရနအသင်းတော်ခေတ်နှင့် အရေခြုံနှစ်များအတွင်း) တွင် ကျန်ရစ်သူတိုင်းသည် ဘုရားသခင်၏လူအစစ်များဖြစ်သည်ကို ပြသကြလိမ့်မည်။ စစ်​မှန်​သော​ဖြောင့်​မတ်​ခြင်း​ကို​ခံ​ရ​စေ​ခြင်း​ငှာ၊ (သာဒိမြို့၌ ယေရှုသတိပေးသကဲ့သို့ သူတို့သည် “မသိဘဲ” ဖမ်းခြင်းခံရသည်။)
ဖိလဒဲဖီးယားကို ယေရှုသတိပေးသည်– ဘုရားသခင်သည် သန့်ရှင်းသူတို့အား သန့်ရှင်းစည်းလုံးစွာထားရန် တန်ခိုးရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မိမိလူမျိုးအား ပေးထားသည့် ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းသရဖူကို မည်သူမျှ မခိုးယူစေနှင့်။
ယခု ဘုရားသခင်သည် ကွဲပြားသောအသင်းတော်အမှတ်အသားအစား မိမိ၏လူမျိုးအား မိမိ၏အထောက်အထားကို ပေးဆောင်လျက်ရှိသည်- “... ငါ၏ဘုရားသခင်၏နာမတော်နှင့် ယေရုရှလင်မြို့သစ်ဖြစ်သည့် ငါ၏ဘုရားသခင်၏မြို့အမည်ကို သူ့အပေါ်၌ ငါရေးထားမည်။ ငါ၏ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကင်ဘုံ။” (ဗျာဒိတ် ၃း၁၂)။ ဘုရားသခင်သည် ယခု (လူမဟုတ်ပါ) ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကို လုပ်ဆောင်နေပြီး ဘုရားသခင်၏ စစ်မှန်သောအသင်းတော်ကို ဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်။
“မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ ဤတံဆိပ်ခတ်နှိပ်ထားသော ဘုရားသခင်၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည် မြဲမြံခိုင်ခံ့မြဲမြံသည်၊ ထာဝရဘုရားသည် မိမိဖြစ်တော်မူသောသူတို့ကို သိတော်မူ၏။ ခရစ်တော်၏နာမကို သမုတ်သောသူမည်သည်ကား၊ ဒုစရိုက်တရားနှင့် ကင်းလွတ်ကြပါစေ။” (၂ တိမောသေ ၂:၁၉)
ဆဋ္ဌမတံဆိပ်ကိုဖွင့်ခြင်း (ဗျာဒိတ် ၆း၁၂-၁၇) ဖော်ပြသည်။
ဝိညာဉ်ရေးငလျင်ကြီး ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် ပေတရုဟောပြောသော ကျမ်းချက်ကို ဆဋ္ဌမတံဆိပ်အဖွင့်တွင် ကိုးကားဖော်ပြထားသည်၊ အကြောင်းမှာ ဤအချိန်သည် ခရစ်ဝင်နေ့အစပိုင်းနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်ပြီး သန့်ရှင်းသောလှုပ်ရှားမှုနှင့် ဆင်တူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
မှားယွင်းသော ၀န်ကြီးများကို ကိုယ်စားပြုသော ကြယ်များသည် ကျဆုံးသော ဝန်ကြီးဌာနအဖြစ် ဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်။
လူတို့ဖန်တီးထားသော မှားယွင်းသောဘာသာတရား၏ တောင်နှင့်ကျွန်းတိုင်းကို ၎င်းတို့၏နေရာများမှ ရွှေ့ပြောင်းထားသည်။
တရားဟောခြင်းနှင့် ထုတ်ဖော်ခြင်းခံရသော ဘုရားသခင်၏ ကြီးစွာသော အမျက်တော်မှ ဖုံးကွယ်ရန် ဘာသာတရား၏ တောင်တန်းများနှင့် ကျောက်ဆောင်များအတွက် လူများက အော်ဟစ်နေကြသည်။
ဆဌမတံပိုး (ဗျာဒိတ် ၉:၁၃ – ၁၁:၁၃) သတိပေးသည်–
ကြီးစွာသော ဝိညာဉ်ရေး သတ်ဖြတ်မှုကြီး ဖြစ်ပွားနေပါသည်။ လျှို့ဝှက်သောသူအပေါင်းတို့သည် ၎င်းတို့၏လှည့်ဖြားမှုနှင့် ၎င်းတို့၏နောက်ကွယ်ရှိ နတ်ဆိုးများထံ အပ်နှင်းခံရလျက်ရှိသည်။
တန်ခိုးကြီးသောကောင်းကင်တမန်/တမန်၊ ယေရှုကိုယ်တိုင်သည် မိမိရွေးချယ်ထားသောဓမ္မအမှုအတွက် ဗျာဒိတ်သတင်းတရားကို နားလည်သဘောပေါက်ပြီး လူမျိုးများစွာတို့အား ဟောပြောရန် အမိန့်ပေးခံရသည်။
ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်နှင့် လူသားတို့၏ အရေခြုံမှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ဘုရားသခင်၏ ဝိညာဉ်တော်၏ တိုက်ပွဲသည် ထပ်လောင်း ထင်ရှားသည်။
ကွပ်မျက်ခံရသော ဘုရားသခင်၏ အမျက်ဒေါသ၏ ဆဌမပုလင်း (ဗျာဒိတ် ၁၆း၁၂-၁၆) တရားသူကြီးများသည်-
ကျဆင်းသွားသော “ခရစ်ယာန်ဘာသာ” ၏လျှို့ဝှက်မှုဆီသို့ စီးဆင်းနေသည့် နှလုံးသားစီးဆင်းမှု (သို့မဟုတ် ကိုယ်ချင်းစာမှု) တို့ကို ခန်းခြောက်စေသည်။ “အရှေ့ဘုရင်များ” ဖြစ်သော ဘုရားသခင်၏ လူစစ်များသည် ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန် (ခရစ်ယာန်အတုအယောင်) သို့ ချီတက်နိုင်ပြီး သူမ၏ အရေခြုံမှုမှ လူများကို ကယ်တင်နိုင်စေရန် ယင်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ (ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင် ကုရုနှင့်သူ၏စစ်တပ်သည် ရှေးတံတိုင်းခတ်ထားသော ဗာဗုလုန်မြို့ကို ဖျက်ဆီးမည်ဟု ဖော်ပြထား သည်။ သူသည် ဥဖရေးတီးမြစ်ကို လမ်းကြောင်းပြောင်းပေးခြင်းဖြင့် ဗာဗုလုန်သို့စီးဆင်းမှု ခန်းခြောက်သွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူ၏တပ်များသည် မြစ်ကြမ်းပြင်ဖြင့် မြို့ထဲသို့ ချီတက်သွားနိုင်သည်။ )
ဤမြစ်သည် ဝိညာဏဗာဗုလုန်မှ ခန်းခြောက်သွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် ဗာဗုလုန်၏ လျှို့ဝှက်သောသဘောကို စာနာစိတ်ရှိသူများ၏ စိတ်နှလုံးထဲတွင် ညစ်ညူးသောနတ်များ ပေါ်လာပြီး အမှန်တရားကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ရန် ဘာသာရေးသမားများကို စုစည်းခြင်းဖြင့် တုံ့ပြန်ကြသည်။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝိညာဉ်ရေးအဝတ်များကို “အစက်အပြောက်ကင်းအောင်” ထားရန် ကျွန်ုပ်တို့သတိပေးခံရသည်၊ သို့မဟုတ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့သည် စုစည်းကာ ဝိညာဉ်ရေးအရ ဖျက်ဆီးခြင်းခံရလိမ့်မည်။
AD 1930 (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) – သတ္တမအသင်းတော်ခေတ်အစ- လောဒိကိ
မှတ်ချက်- ဤနောက်ဆုံးအသင်းတော်ခေတ်၏အစကို ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှ အတိအကျသတ်မှတ်မရနိုင်ပါ၊ အကြောင်းမှာ ဝိညာဉ်ရေးနေ့ရက်/နှစ်ကာလကို ဆဋ္ဌမအသင်းတော်ခေတ်အတွက် လုံးဝသတ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သတ္တမနောက်ဆုံးအသင်းတော်ခေတ်၏ အရှည်အတွက် သတ်မှတ်ထားသော ရက်/နှစ် ကာလလည်း မရှိပါ။ သို့သော် ၇ ကြိမ်မြောက် အသင်းတော်ခေတ်အစတွင် ဖြစ်ပျက်နေသည့် အချိန်ကာလတစ်ခုအတွက် ပေးထားသည့် ဝိညာဏဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုရှိသည်။ “နာရီဝက်ခန့်” ဘုရားကျောင်းအတွင်း ဝိညာဉ်ရေးတိတ်ဆိတ်နေသည့်ကာလ။
အနောက်ကမ္ဘာ၏ သန့်ရှင်းမှုနှင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လှုပ်ရှားမှုသည် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု၊ မိမိကိုယ်ကို အားကိုးမှုနှင့် မိမိကိုယ်ကို အကာအကွယ်ပေးမှုတို့ အချိန်ကာလတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိလာသည်၊ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာများစွာသည် ဘုရားကျောင်း၏ ဝိသေသလက္ခဏာကို ပိုမိုခိုင်မာစေရန်နှင့် ၎င်းတို့၏အမြင်ကို ခိုင်မာစေရန် ထပ်မံလုပ်ဆောင်လာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် အသင်းတော်နှင့်အတူရှိနေဆဲဖြစ်သော်လည်း ဓမ္မဆရာများသည် ၎င်းတို့၏ထင်မြင်ယူဆချက်များနှင့် အစီအစဉ်များကို ပို၍အလေးထားသရွေ့ အစွမ်းထက်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဆဋ္ဌမမြောက်ချာ့ခ်ျခေတ်၏ အင်အားကြီးသော ဝိညာဉ်ရေးငလျင်များသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် အသင်းတော်တို့အပေါ် ၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုတွင် သိသိသာသာ လျော့ကျသွားပြီး “ဝိညာဉ်ရေးတိတ်ဆိတ်ခြင်း” အမျိုးအစားကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ထို့နောက်၊ ဓမ္မဆရာများသည် လှုပ်ရှားမှုအတွင်း အုပ်စုများကို အမှန်တကယ် စတင်ဖန်တီးကြပြီး ၎င်းတို့မှတဆင့် ဘုရားသခင်၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုအားနည်းစေသည်။ ထို့ကြောင့် အနောက်တိုင်းချာ့ခ်ျသည် ကိန်းဂဏန်းအမှန်များဖြင့် အလွန်လျော့နည်းသွားသည်။
ဤအတောအတွင်း၊ ကမ္ဘာ၏တစ်ဖက်ခြမ်းတွင် ဝိညာဉ်ရေးတိတ်ဆိတ်နေသည့်အချိန်နှင့် ဝိညာဉ်ရေးအမှောင်ဆုံးနေရာအချို့တွင်- အနောက်တိုင်းဓမ္မအမှု၏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးမှုများနှင့် နှိမ့်ချမှုများမရှိဘဲ ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်တိုင်သည် နေ့ကတည်းက အကြီးကျယ်ဆုံးပြန်လည်နိုးကြားရေးလှုပ်ရှားမှုကို စတင်ခဲ့သည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲ။ အထူးသဖြင့် တရုတ်ပြည်တွင်၊ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ၏ ပြင်းထန်သော ဖိနှိပ်မှုများကြားတွင်၊ ဘုရားသခင်သည် ပျောက်ဆုံးသွားသော ကမ္ဘာမြေသို့ ဆက်လက်ရောက်ရှိရန် သူ၏ခေါ်သံကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လူများကို ထူထောင်ခဲ့သည်။ သို့သော် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ အနောက်ကမ္ဘာမှ ကျဆုံးသွားသော ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုသည် တရုတ်နိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဤကြီးကျယ်သော လှုပ်ရှားမှုအချို့ကို လှည့်ဖြားရန်နှင့် ဟန့်တားရန် နောက်တဖန် စိမ့်ဝင်လာသည်။
တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဘုရားကျောင်း၏ သန့်ရှင်းမှု/စည်းလုံးညီညွတ်မှု လှုပ်ရှားမှု၏ အကြွင်းအကျန်အနည်းငယ်သည် ၎င်းတို့၏ နွေးထွေးမှုမှ နိုးကြားလာကာ ဉာဏ်အလင်းဖြစ်လာသူ အခြားသူများလည်း နိုးထလာကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခံရသော ဘုရားသခင်၏အမှုတော်၏ ကြီးမားသောပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြန်လည်မြင်တွေ့နိုင်စေရန် “မျက်စိဆေးလိမ်းထားသော မျက်လုံးများ” ထိုနေရာကို စတင်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
လောဒိကိထံပေးစာ (ဗျာဒိတ် ၃:၁၄-၂၂) ဖော်ပြသည်။
ချာ့ချ်သည် ၎င်းတို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ “စည်းစိမ်ဥစ္စာနှင့် တိုးပွားများပြားပြီး အချည်းနှီးမရှိ” ဟူသောသဘောထားကို ဝိညာဉ်ရေးအရခံယူထားသည်။ Philadelphia တွင် သတိပေးထားသည့်အတိုင်း အမျိုးသားများသည် ချာ့ခ်ျမှ သရဖူကို ဖြုတ်ယူကြသည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ “စိတ်ဆင်းရဲ၊ ဆင်းရဲ၊ ဆင်းရဲ၊ မျက်စိကန်း၊ ကိုယ်လုံးတီး” ဖြစ်လာကြောင်း ယေရှု သတိပေးခဲ့သည်။
ကျော်လွှားရန် အသင်းတော်အတွက် ယေရှု၏ကောင်စီ- ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝိညာဉ်ရေးအရ ကြွယ်ဝလာစေရန် မီးခဲစမ်းသပ်မှုများနှင့် နှုတ်ကပါဌ်တော်အားဖြင့် သင်၏ယုံကြည်ခြင်းကို စမ်းတဝါးဝါး ကြိုးစားဖြတ်သန်းလိုစိတ်ရှိပါ။ သင့်အုပ်စုများနှင့် မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်မှုများကြောင့် သင့်အဝတ်အစားများမှ အစက်အပြောက်များကို သန့်ရှင်းစေခြင်းဖြင့် သင်ပြန်လည်သန့်ရှင်းလာစေရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကို တစ်ဖန်ပြန်မြင်နိုင်စေရန်အတွက် ဘုရားသခင်၏ခေါ်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်အတွက် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆန္ဒဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကို လိမ်းပါ။
ယေရှုသည် ချစ်တော်မူသမျှကို ဆုံးမပြီး ဆုံးမတော်မူသည်– “ထို့ကြောင့် စိတ်အားထက်သန်၍ နောင်တရကြလော့။”
ထို့နောက် ဖိလဒဲဖိမြို့တွင်ဖွင့်ထားသော ကောင်းကင်ပလ္လင်တော်တံခါးသည် လောဒိကိအတွက်ဖွင့်ထားဆဲဖြစ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပြီး၊
“ထိုနောက်မှ ငါကြည့်ရှု၍ ကောင်းကင်ဘုံ၌ တံခါးပွင့်သည်ဖြစ်၍၊ ငါနှင့်စကားပြောသော တံပိုးမှုတ်သံကဲ့သို့၊ ဤအရပ်သို့ တက်လာလော့၊ နောင်ဖြစ်လတံ့သောအရာတို့ကို ငါပြမည်ဟု ဆို၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၄:၁
သတ္တမတံဆိပ်ကိုဖွင့်ခြင်း (ဗျာဒိတ် ၈:၁-၆) ဖော်ပြသည်။
ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ ဧဝံဂေလိတရားနေ့နာရီတွင် နာရီဝက်ခန့်ရှိသော “ခရစ်တော်ယေရှု၌ရှိသော ကောင်းကင်အရပ်” တွင် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်းဖြင့် စတင်သည်။
တံပိုးမှုတ်ပေးသော ကောင်းကင်တမန် ခုနစ်ပါး၏စုဝေးမှုကို ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရသော်လည်း တံပိုးမမြည်သေးပါ။ သူတို့တွင် ဗျာဒိတ်အလင်းရှိသော်လည်း ဘိသိက်ခံမဟုတ်သေးပါ။
နံနက်ပိုင်းနှင့် ညနေပိုင်း ယဇ်ပူဇော်ခြင်း (ဓမ္မဟောင်း ဗိမာန်တော်ဝတ်ပြုခြင်း) နှင့် တူညီသော မြင်ကွင်းတစ်ခု ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် ကောင်းကင်တမန်/တမန်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင်ရှေ့တော်၌ ရွှေယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် နံ့သာပေါင်းကို မီးရှို့ရန် မတ်တတ်ရပ်နေသည်ကို မြင်တွေ့ရသည်။ ဤကောင်းကင်တမန်သည် အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်၏ ပလ္လင်တော်ရှေ့တွင် အခြားမည်သူမျှမရှိသောကြောင့် ဓမ္မသစ်ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်း ယေရှုခရစ်သာလျှင် ဖြစ်နိုင်သည်။
မှတ်ချက်- ယခုအချိန်သည် ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏ ညနေဖြစ်သည်။
ညနေပူဇော်ပွဲ၏ပုံစံအရ၊ ယေရှုခရစ်၏ရွှေယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် “သန့်ရှင်းသူအပေါင်းတို့” ၏ဆုတောင်းချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။
ထို့နောက် သခင်ယေရှုသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မီးကို ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်သို့ ပစ်ချလိုက်ပြီး ဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာ “အသံ၊ မိုဃ်းချုန်းခြင်း၊ လျှပ်စီးလက်ခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း” လည်း ရှိပါသည်။
ထိုမှသာလျှင် တံပိုးမှုတ်နိုင်စွမ်းရှိသော သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ ဘိသိက်ခံ ကောင်းကင်တမန်များဖြစ်ကြသည် ။
သတ္တမတံပိုး (ဗျာဒိတ် ၁၁:၁၅-၁၉) သတိပေးသည်-
ကြေငြာချက်- “နိုင်ငံအားလုံးသည် ဘုရားသခင်နှင့်သက်ဆိုင်သည်!” လူသားတို့၏ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သော ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစီအစဉ်တိုင်းကို အနိုင်ယူရမည်။ ဤနည်းဖြင့် စစ်မှန်သော သူတော်စင်များ လွတ်မြောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“လူအမျိုးမျိုးတို့သည် အမျက်ထွက်၍၊ အမျက်တော်သည် လာ၍၊ သေလွန်သောကာလ၊ သူတို့သည် တရားစီရင်ခြင်းခံရမည်အကြောင်း၊ ကိုယ်တော်၏ ကျွန်ပရောဖက်များ၊ သန့်ရှင်းသူတို့နှင့် နာမတော်ကို ကြောက်ရွံ့သော သူတို့အား ဆုချစေခြင်းငှာ၊ အသေးနှင့်အကြီး; မြေကြီးကို ဖျက်ဆီးသောသူတို့ကို ဖျက်ဆီးရမည်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘုရားသခင်၏ ဗိမာန်တော်ကိုဖွင့်၍ သက်သေခံချက်သေတ္တာတော်ကို ဗိမာန်တော်၌ မြင်သဖြင့်၊ လျှပ်စီး၊ အသံ၊ မိုဃ်းချုန်းခြင်း၊ မြေငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ ~ ဗျာဒိတ် ၁၁:၁၈-၁၉
Seventh Trumpet သည် အခန်း 14 ၏အဆုံးအထိ တောက်လျှောက် မှုတ်နေပါသည်။
သတ္တမမြောက် ကွပ်မျက်ခံရသော ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော် ဖန်ပုလင်း (ဗျာဒိတ် ၁၆း၁၇-၂၁) တရားသူကြီးများသည်-
လူသားအားလုံး အထူးသဖြင့် ဘာသာရေးအရ လူသားမျိုးနွယ်တွင် မနာခံမှုစိတ်ဓာတ်ကို အပြည့်အဝ တရားစီရင်ခဲ့သည်။ "ပြီးပြီ!" (ဗျာဒိတ် ၁၆:၁၇)၊
ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်ကို လုံးဝဖော်ထုတ်ပြီး အပိုင်းသုံးပိုင်းခွဲထားသည်- Paganism၊ Catholicism နှင့် Protestantism။ ယခုအချိန်သည် သူ၏ ပျက်စီးယိုယွင်းနေသော ဝိညာဉ်ရေးသြဇာကို ဘုရားသခင်၏လူတို့၏ဘဝများမှ လုံးလုံးဖျက်ဆီးပစ်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ကောင်းကင်တမန်/တမန်များသည် အမျက်တော်ဖန်ပုလင်းများကို သွန်းလောင်းပြီး အခန်း 17 တွင် ဗာဗုလုန်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကို အပြည့်အဝဖော်ပြသည်။
ထို့နောက် တရားစီရင်ခြင်းကို ပြီးမြောက်ရန် ယေရှုခရစ် ကိုယ်တော်တိုင်၊ ကြီးစွာသော တန်ခိုးနှင့် ဘုန်းအသရေဖြင့် ဤလောကကို လင်းစေသော ကောင်းကင်တမန်ကဲ့သို့ ယေရှုခရစ်သည် “ငါ၏လူတို့ထံမှ ထွက်သွားကြလော့။” (ဗျာဒိတ် ၁၈:၄)
ထို့ကြောင့် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏ ခုနစ်ရက်မြောက်သောနေ့ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာမြေကြီးတစ်ခုလုံး၏နောက်ဆုံးအဆုံးသတ်အချိန်ကို ဘုရားသခင်သာလျှင်သိသည်၊ သို့သော် ထိုသို့ဖြစ်လာသောအခါ၊ လူတိုင်းအတွက် နောက်ဆုံးတရားစီရင်မည့်နေ့ရှိလိမ့်မည်။
အောက်ဖော်ပြပါသည် ဧဝံဂေလိတရားနေ့ အပြည့်အစုံဖြစ်ပြီး၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှ ပြောဆိုထားပြီးဖြစ်သော သင်္ကေတများစွာကို- သမိုင်းဆိုင်ရာအချိန်ဇယား၏ ပုံဆောင်အမျိုးအစားတွင် ပြသထားသည်။ (ရုပ်ပုံ၏ နောက်ထပ်အရွယ်အစားဗားရှင်းကို ရယူရန် ပုံကို နှိပ်ပါ။)
ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏သမိုင်းဝင်သရုပ်ဖော်မှု – ပိုကြီးစေရန် “ကလစ်” ပုံ
ထို့ကြောင့် ယခုအချိန်တွင် 1,600 ဖာလုံအကွာအဝေးကို တိုင်းတာသည့်အချိန်ကို အေဒီ 270 မှ (စမာနာဘုရားကျောင်းခေတ်အစ) မှ AD 1880 (ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားဘုရားကျောင်းအစပိုင်း) အထိ အချိန်အနီးစပ်ဆုံးအသုံးပြုနိုင်အောင် ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် လိုအပ်နေသေးသည်ကို မှတ်မိပါသလား။ အသက်)။ ဗျာဒိတ်ကျမ်း ပထမဆုံးရေးသားခဲ့သည့် အာရှတိုက်ရှိ အသင်းတော် ခုနစ်ခု တည်ရှိရာနေရာကို မြေပုံဆွဲကြည့်လျှင် ၎င်းတို့သည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နီးကပ်စွာ တည်ရှိနေပြီး အာရှမိုင်းနားရှိ စက်ဝိုင်းပုံစံနှင့် စီတန်းထားသော ပုံစံအတိုင်း တည်ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ခေတ်တူရကီတွင်တည်ရှိသည်။)
ဤသည်မှာ ဘုရားကျောင်း ခုနစ်ခု တည်ရှိရာ မြေပုံနှစ်ခု ဖြစ်သည် ။
ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ဖော်ပြထားသော အာရှမြို့ခုနစ်မြို့၏ ရှေးမြေပုံကို လေ့လာကြည့်လျှင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် တွေ့ရသော တူညီသော ဆင့်ကဲအစီအစဥ်အတိုင်း၊ စမုရနမြို့မှ စတင်ကာ ပေရဂမုတ်မြို့၊ သွာတိရမြို့၊ ထို့နောက် သာဒိမြို့သို့ အဆုံးအထိ အကွာအဝေး၊ Philadelphia တွင် 1600 ဖာလုံခန့်အကွာအဝေးရှိသည်။ (ရှေးဟောင်းဖာလုံတစ်ခု သို့မဟုတ် ဂရိစတက်ဒီယာသည် ပေ 607 မှ 630 အကြားရှိသည်။ ဤအကွာအဝေး 1600 ဖာလုံ၏အကွာအဝေးကို Google မြေပုံများပေါ်တွင် ဖော်ပြထားသည့်လင့်ခ်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းတွင် အာရှမြို့များ၏ ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာခုနစ်ခုကို မြေပုံပေါ်တွင်ဖော်ထုတ်ထားသည့် အထက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်တွင် သင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ )
ထိုမြို့များကြားမှ အခြားလမ်းကို ခရီးသွားခြင်းဖြင့် ထိုတူညီသော အကွာအဝေး 1,600 ဖာလုံအထိ မရောက်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့် ဖာလုံရှိ ပထဝီဝင်အကွာအဝေးသည် နှစ်များအတွင်း သမိုင်းဝင်အချိန်ဇယားနှင့် ညီမျှသည်- "1,600 ဖာလုံ" နေရာသည် AD 270 (Smyrna) မှ AD 1880 (Philadelphia) အထိ ပြောင်းလဲလာသော နှစ်ပေါင်း 1,610 နှင့် အလွန်နီးစပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဤသမိုင်းဝင်ရက်စွဲများအားလုံးသည် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အမှန်တကယ်အားဖြင့် 10 ၏ ခြားနားချက်အတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရက်စွဲများကို သတ်မှတ်နိုင်မှုမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်မှုတွင် ကန့်သတ်ချက်များနှင့် သမိုင်းပညာရှင်များက မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ရက်စွဲများ၏ တိကျမှု၏ အကန့်အသတ်များသာဖြစ်သည်။ သို့သော် အကွာအဝေးနှင့် အချိန်နှစ်ခုစလုံးကို ဘုရားသခင်၏ နားလည်မှုသည် ပြီးပြည့်စုံသည်။
ထို့ကြောင့် ယခုအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသမိုင်းဆိုင်ရာ အချိန်ဇယားမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
အေဒီ ၃၃ – ပင်တေကုတ္တေပွဲ၏ ခန့်မှန်းခြေနေ့၊ ဧဖက်အသင်းတော်ခေတ်မှ စတင်သည်။
AD 270 - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Smyrna ဘုရားကျောင်းခေတ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
အေဒီ 530 - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Pergamos ဘုရားကျောင်းခေတ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
AD 1530 - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သွာတိရဘုရားကျောင်းခေတ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
AD 1730 - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် သာဒိအသင်းတော်ခေတ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
AD 1880 - ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် Philadelphia ဘုရားကျောင်းခေတ်ကို စတင်ခဲ့သည်။
AD 1930 – ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် “ကောင်းကင်ဘုံ၌ တိတ်ဆိတ်ခြင်း” ကာလဖြင့် အစပြုသော လောဒိကိအသင်းတော်ခေတ်။ (70 နှောင်းပိုင်းတွင် လူများသည် ရွာများတွင် တစ်ဖန်ပြန်လည်ကယ်တင်ခြင်းခံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် တရုတ်ပြည်အတွက် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်နေချိန် ကုန်ဆုံးသွားကာ ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအတွင်း ကြီးစွာသော ပြန်လည်နိုးထမှုကြီးသည် တစ်ပြိုင်နက် ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ လူသန်းနှင့်ချီ၍ မရှိသလောက်ဖြစ်နေရာမှ ကြီးထွားလာသည်။ ဒီနေ့။)
အေဒီ? - မြေကြီးပေါ်ရှိအချိန်အားလုံး၏အဆုံး၊ နှင့်ထာဝရကာလစတင်သည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွင်း၌ အသင်းတော်ခေတ်များ၏ နောက်ဆုံးဖော်ထုတ်ခြင်း။
ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၇ တွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်း၏ နောက်ဆုံး အဋ္ဌမမြောက်သားရဲနှင့် ပြည့်တန်ဆာ ဗာဗုလုန်သည် ဤသားရဲ၏ထိပ်တွင် စီးနင်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဤနောက်ဆုံးသားရဲသည် World Council of Churches နှင့် United Nations ၏စကြဝဠာအဖွဲ့အစည်းများရှိ ဘာသာတရားများနှင့် အစိုးရများအားလုံး စုစည်းလာမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။
သမိုင်း၏အလယ် သို့မဟုတ် အမှောင်ခေတ်တွင်၊ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသည် ဝိညာဉ်ရေးရာနှင့် နိုင်ငံရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှတစ်ဆင့် ဤစကြဝဠာဆိုင်ရာ အခွင့်အာဏာနှင့် ပါဝါအမျိုးအစားဖြင့် ဤမြေကြီးဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွင် အဓိကရပ်တည်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် အလယ်တန်းကာလတွင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းက သူ့ကို သားရဲတစ်ကောင်အဖြစ် ကိုယ်စားပြုသည်။ သို့သော် ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏ နောက်ဆုံးနှစ်ချာ့ခ်ျခေတ်တွင်၊ World Council of Churches နှင့် United Nations (နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းအဖြစ် စတင်ခဲ့သော) သည် ဤအခန်းကဏ္ဍသို့ ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျသည် ဤအာဏာ သို့မဟုတ် အခွင့်အာဏာကို တိုက်ရိုက်မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ဘဲ၊ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့အစိုးရအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသည့် ဤနောက်ဆုံးသားရဲမှတစ်ဆင့် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ပြည့်တန်ဆာဗာဗုလုန် (အထူးသဖြင့် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျကို ကိုယ်စားပြုသော်လည်း အခြားအသင်းတော်များ၏ နိုင်ငံရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုလည်း ပါဝင်သည်) ဤသားရဲ၏ထိပ်တွင် ထိုင်နေပါသည်။ ၎င်းသည် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်များ၏ အစိုးရခေါင်းဆောင်များမှတစ်ဆင့် မူဝါဒကို သြဇာလွှမ်းမိုးပြီး ကြိုးကိုင်နိုင်စွမ်းကို ပြသသည်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးနှင့် ဗာတီကန်တွင် နိုင်ငံတိုင်း၏တရားဝင်သံတမန်များရှိပြီး လိုအပ်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် မတူညီသောကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်များနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရှိသည်။ ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဤကဲ့သို့သော ကျယ်ပြန့်သော လောကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမျိုး အခြားဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ မရှိပါ။
သို့သော် ဗျာဒိတ် ၁၇ တွင် ဗာဗုလုန်စီးသော ဤသားရဲသည် ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်တွင် အုပ်စိုးသော လူတို့၏ အစိုးရများကဲ့သို့ သားရဲကို ကိုယ်စားပြုသောကြောင့် ၎င်းသည် ကာလကြာရှည်စွာ တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဗျာဒိတ်ကျမ်းအတွင်းရှိ သားရဲတစ်ကောင်စီကို ဖော်ပြပုံဖြင့် ဤအချက်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေပါသည်။
နဂါးကြီး ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၂ တွင် ပုဂံဘာသာကို ကိုယ်စားပြုသည်- ခေါင်းခုနစ်လုံးနှင့် ချိုဆယ်ချောင်း၊. ဦးခေါင်းခုနစ်လုံးပေါ်တွင် သရဖူများဖြင့် အားလုံးကို အုပ်စိုးရန် ဘုရင်တစ်ပါး၏ အာဏာသည် ရောမမြို့အတွင်း “ဦးခေါင်း” တွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။
ကက်သလစ်သားရဲ ဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၃ တွင်- ခေါင်းခုနစ်လုံးနှင့် ချိုဆယ်ချောင်း၊. ချိုဆယ်ချောင်းပေါ်တွင် သရဖူများဖြင့် စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချပြီး နိုင်ငံအသီးသီး၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင် ဘုရင်များနှင့်အတူ အနားယူကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
ယခုလည်း နောက်ဆုံး အဋ္ဌမသားရဲဗျာဒိတ်ကျမ်း အခန်းကြီး ၁၇ တွင် ကုလသမဂ္ဂကို ကိုယ်စားပြုသည်- ခေါင်းခုနစ်လုံးနှင့် ချိုဆယ်ချောင်း၊. သို့သော် ဤသားရဲတွင် သရဖူများ လုံးဝမရှိပေ၊ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာသည် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဘုရင်များနှင့်အတူ လုံးဝမရှိတော့ကြောင်း ပြသနေသည်။ သို့သော် အမျိုးမျိုးသော နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များဖြင့် ယေဘုယျအားဖြင့် အချို့သောပုံစံဖြင့် ရာထူးသက်တမ်းအတွက် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြသည်- အာဏာရှင်များ၊ ကွန်မြူနစ်ပါတီခေါင်းဆောင်များ၊ သမ္မတများ၊ ကွန်ဂရက်များ၊ လွှတ်တော်များ အစရှိသည်တို့၊
ဦးခေါင်းခုနစ်လုံးနှင့် ချိုဆယ်ချောင်းတို့သည် ဤနေရာတွင် ဆင်တူခြင်း၏ တိကျသောပုံစံကို ပြသနေပုံရသည်...
သို့သော် ဤလှည့်စားတတ်သော ပြည့်တန်ဆာနှင့် သားရဲနှင့်ပတ်သက်သော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတစ်ခုရှိသေးသည်။ တရားစီရင်ခြင်းကောင်းကင်တမန်သည် ယောဟန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြသလိုသော လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဗျာဒိတ် ၁၇ တွင် သားရဲအကြောင်းဖော်ပြရာတွင်၊
“သင်မြင်သောသားရဲသည် ရှိ၍မဟုတ်၊ အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲက တက်၍ ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်ကြလိမ့်မည်။ မြေကြီးပေါ်မှာနေသော သူတို့သည် ဤလောကတည်ကတည်းက အသက်စာစောင်၌ နာမည်မရေးထားဘဲ၊ ထိုသားရဲကို မြင်သောအခါ အံ့သြကြလိမ့်မည်။ မဟုတ်သေးဘူး၊ ဖြစ်နေတာ။” ~ ဗျာဒိတ် ၁၇:၈
(ပုဂံဘာသာတွင် ထင်ရှားတည်ရှိနေသော) သားရဲသည် (ကက်သလစ်ဘာသာအတွင်း အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိသော) ဖြစ်သော်လည်း (သိုး၏အဝတ်အစားဝတ်ဖြင့် Paganism ကဲ့သို့ အောက်ခြေမရှိသောတွင်းမှ ထွက်လာသော ပရိုတက်စတင့်ဘာသာအားဖြင့် ဝှက်ထားခြင်းမရှိတော့ပေ။ /Pagan beast သည် ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ပုံစံဖြင့် သားရဲရုပ်တုပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားခဲ့သည်) ဤဝိညာဉ်ရေးအရ ခရစ်ယာန်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် ဦးခေါင်းခုနစ်လုံးနှင့် ချိုဆယ်ချောင်းပါသော သားရဲများသည် ဝိညာဉ်ရေးအရ တူညီကြသည်။
ဗျာဒိတ်ကျမ်းက ဘုရားသခင်မရှိဘဲ လူသားများသည် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ သားရဲနှင့်တူသော အုပ်ချုပ်မှုဖြင့် တူညီသော ရှေးသားရဲနှင့်တူသော သတ္တဝါမျှသာဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား ဗျာဒိတ်ကျမ်းက ပြသနေသည်။ ဒါကြောင့် လူသားတွေ ဖွဲ့ထားတဲ့ အစိုးရတွေဟာ အမြဲတမ်း သားရဲနဲ့တူတယ်။ ထို့ကြောင့် သမိုင်းတွင် ရိုမန်ကက်သလစ်သားရဲ၏ အဖုံးများအောက်တွင် ပုန်းအောင်းနေသည့် ပုဂံသားရဲကို ဦးစွာတွေ့မြင်နေရပါသည်။ ထို့နောက် ပြိုလဲနေသော ပရိုတက်စတင့်ဘာသာမှတဆင့် ပုဂံဘာသာ၏ နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်တူထပ်မျှသော တိရိစ္ဆာန်ပုံတူရုပ်တုကို ဖန်တီးကာ နောင်တွင် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာခဲ့သည်၊ ယင်းနှစ်ပါးစလုံးမှာ အဋ္ဌမသားရဲများဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် သမ္မာကျမ်းစာ (ဒံယေလနှင့် ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှ) ပရောဖက်ပြုချက်များ၌ ဤရှစ်မျိုးမြောက် သားရဲခုနစ်ကောင်ရှိသောကြောင့်၊
လင်းယုန်၏အတောင်ပံပါသော ခြင်္သေ့သားရဲ—ရှေးဗာဗုလုန်နိုင်ငံတော်ကို ကိုယ်စားပြုသည် (ဒံယေလ ၇:၄)
ဝက်ဝံသားရဲ – Medo-Persia ၏နိုင်ငံတော် (ဒံယေလ ၇:၅)
ကျားသစ်သားရဲ – ဂရိနိုင်ငံတော်ကိုယ်စားပြု (ဒံယေလ ၇:၆)
ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော သားရဲ—ရောမနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုသည် (ဒံယေလ ၇:၇)
နဂါးသားရဲ - ရောမမြို့ရှိ ပုဂံဘာသာကို ကိုယ်စားပြုသော အထူးအားဖြင့်၊ ရောမဧကရာဇ်များ၏ “အင်ပါယာကိုးကွယ်မှု” ယေရှုခရစ် စတင်ကြွလာချိန် နှစ်များအတွင်း စတင်ခဲ့ပြီး ခရစ်တော်၏ ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ် တစ်သက်တာကာလအတွင်း ချုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ (ဗျာဒိတ် ၁၂:၃)
သားရဲ—ကက်သလစ်ဘာသာကို ကိုယ်စားပြုသည် (ဗျာဒိတ် ၁၃း၁)၊
ပရိုတက်စတင့်ကို ကိုယ်စားပြုသော သိုးသငယ်နှင့်တူသော သားရဲ (ဗျာဒိတ် ၁၃း၁၁)၊
ဤရှစ်ပါးမြောက်သားရဲကို ဖန်ဆင်းခြင်းသည် ဆဋ္ဌမမြောက်အသင်းတော်ခေတ်တွင် ပေါ်ပေါက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအချိန်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကာ၊ ဗျာဒိတ်ကျမ်းသည် ဧဝံဂေလိတရားနေ့၏အသက်အပိုင်းအခြားတစ်ခုစီတွင် (အသင်းတော်ခေတ်တစ်ခုစီအတွက် တစ်ခုစီ) တွင် မတူညီသောသားရဲနိုင်ငံရှိကြောင်း ဖော်ကျူးရန်အတွက် သားရဲ၏ဦးခေါင်းခုနစ်လုံးကို ဖော်ထုတ်ဖော်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤနောက်ဆုံး အဋ္ဌမသားရဲ ပေါ်ထွန်းလာချိန်တွင်၊ ၎င်းသည် သားရဲနိုင်ငံတော်၏ ခြောက်ခုမြောက် အသက်နှင့် ဆဋ္ဌမမြောက် ဘုရားကျောင်းခေတ်- Philadelphia ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင် သားရဲ၏ဦးခေါင်းများ၏ အဆက်ပြတ်မှုသည် (အချိန်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် သဘာဝအတိုင်း ဆက်တိုက်ဖြစ်နေပုံကို ပြသသည်) ဤနောက်ဆုံးသားရဲသည် သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော တူညီသောသားရဲဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။
“ဤအရပ်၌ ပညာရှိသော စိတ်သည် ရှိ၏။ ခေါင်းခုနစ်လုံးသည် မိန်းမထိုင်သော တောင်ခုနစ်လုံးဖြစ်၏။ ရှင်ဘုရင်ခုနစ်ပါးရှိ၍၊ ကြွလာသောအခါ တိုတောင်းသော နေရာကို ဆက်သွားရမည်။ ထိုမှမဟုတ်သော သားရဲသည် အဋ္ဌမမြောက် ဖြစ်၍ ခုနစ်ကောင်အနက်မှ ဖြစ်သဖြင့် ပျက်စီးခြင်းသို့ ရောက်၏။ ~ ဗျာဒိတ် ၁၇:၉-၁၁
“ထို့နောက် ဘုရင်ခုနစ်ပါးရှိ၏၊ ငါးပါးပြိုလဲ၍ တစ်ပါးသည်…” (ဆဋ္ဌမသားရဲနိုင်ငံတော် – ဆဋ္ဌမမြောက်ဦးခေါင်း) သည် ဆဋ္ဌမအသင်းတော်ခေတ်တွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းဖြစ်သည်။ “…နောက်တစ်ယောက် မလာသေးဘူး၊ သူလာသောအခါတွင် နေရာတိုလေးသာ ဆက်သွားရမည်။" သားရဲနိုင်ငံတော် (သတ္တမဦးခေါင်း – သတ္တမချာ့ခ်ျခေတ်) သည် ဆဋ္ဌမမြောက်ပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကုလသမဂ္ဂဖြစ်သည်။
“ခုနစ်ကောင်ထဲကပဲ…” ဟူသည်မှာ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် မတူညီသောပုံစံများဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော အဓိကအားဖြင့် တူညီသောသားရဲဖြစ်ကြောင်း ပြသသည်။
ဤနောက်ဆုံးရှစ်ပါးသောသားရဲသည် ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မည် ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ၊ နောက်ဆုံးသောလူသား-တိရစ္ဆာန်စကြာဝဠာနိုင်ငံ (ကုလသမဂ္ဂနှင့် လူလုပ်ဘာသာတရားအားလုံးကို ကိုယ်စားပြုသော) ဟူသော အဓိပ္ပါယ်မှာ နောက်ဆုံးတရားစီရင်ရာနေ့တွင် ငရဲသို့ချရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးဗာဗုလုန်။ ဤကုလသမဂ္ဂ အဋ္ဌမမြောက်သားရဲပေါ်တွင် ထိုင်နေသော ဗာဗုလုန်ပြည်တန်ဆာသည် ဘာသာရေး ဖောက်ပြန်ခြင်း၏ အဆုံးစွန်ကို ကိုယ်စားပြုသည်၊ တစ်ချိန်က အသင်းတော်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း မြေကြီးဆိုင်ရာ အာဏာအတွက် သူ့ကိုယ်သူ ဖောက်ပြန်သွားခဲ့သည်။ သူမသည် အထူးသဖြင့် ကက်သလစ်ချာ့ခ်ျအတွင်း ရဲရင့်သည်။ အဋ္ဌမသားရဲသည် ဤညစ်ညူးသောကက်သလစ်ချာ့ခ်ျကိုမုန်းတီးသော်လည်း၊ ဤသူတော်ကောင်းမရှိလျှင် သားရဲသည် ဖြူစင်သောဧဝံဂေလိတရားအမှန်တရားကို ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိသောကြောင့် သူမ၏အရေခြုံမှုကို တည်ရှိနေစေဆဲဖြစ်သည်။
“ထိုသားရဲ၌မြင်သော ချိုဆယ်ချောင်းတို့သည် ပြည်တန်ဆာကိုမုန်း၍ သုတ်သင်ပယ်ရှင်း၍ အဝတ်အချည်းစည်းရှိစေ၍ အသားကိုစား၍ မီးရှို့ကြလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်သည် သူ၏အလိုတော်ကို ပြည့်စုံစေခြင်းငှာ၊ သဘောတူ၍ သူတို့၏နိုင်ငံကို သားရဲ၌ အပ်နှင်းခြင်းငှါ၊ ဘုရားသခင်၏ စကားတော် ပြည့်စုံခြင်းသို့ ရောက်သည်တိုင်အောင်၊ ~ ဗျာဒိတ် ၁၇:၁၆-၁၇
ကမ္ဘာသူ ကမ္ဘာသားအများစုသည် သူမ၏ မကောင်းမှုကို မုန်းတီးကြပြီး နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် ၎င်းတို့၏ အပြစ်ရှိသော ဘဝများအတွက် (ကုစားခြင်းထက်) ဖုံးကွယ်ရန် ပံ့ပိုးပေးသည့်တိုင် သူမကို ပရောပရည်ပြုကာ ဂုဏ်ပြုနေကြဆဲဖြစ်သည်။ ဒီအခါမှာ အလွန်ထင်ရှားလာပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂျွန်ပေါသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတိုင်း၏ ခေါင်းဆောင်များသည် ၎င်း၏ ဈာပနတွင် လာရောက် ဂါရဝပြုကြသည်။
ဗာဗုလုန်၏ဝိညာဉ်ရေးနိုင်ငံတော်သည် ရိုးသားသောစိတ်နှလုံးရှိသူတိုင်းအတွက် ဆုံးခန်းတိုင်ပြီ။ သူမ၏ မြေကြီးဆိုင်ရာနိုင်ငံတော်သည် မကြာမီ ကုန်ဆုံးတော့မည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ထာဝစဉ်တည်လိမ့်မည်။
“ဤအရာများကို သက်သေခံသောသူက၊ ဧကန်စင်စစ် ငါသည် အလျင်အမြန်လာမည်ဟု မိန့်တော်မူ၏။ အာမင်။ သခင်ယေရှု၊ ကြွတော်မူပါ။” ~ ဗျာဒိတ် ၂၂:၂၀